April 2018 | Language Century Language Century
ငပိရည်၊ တို့စရာ - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
4:27 AM C-Word , Chinese
မြန်မာလူမျိုးတွေက ထမင်းဝိုင်းမှာ ငပိရည်၊ တို့စရာလေးတွေ စုံစုံလင်လင်ပါမှ ထမင်းမြိန်တတ်ကြပါတယ်။
蘸醬 zhàn jiàng
ကျန့်hကျန့်(င်) - ငါးပိရည်။ ငပိရည်
半熟蔬菜 bàn shú shū cài
ပန့်ရှူh ရှူးhဆိုက် - တို့စရာ အရွက်ပြုတ်
炸虾酱 zhá xiā jiàng
ကျာhရှားကျန့်(င်) - ငါးပိကြော်။ ငပိကြော်
炸干虾松 zhá gān xiā sōng
ကျာhကန်းရှားစုန်း(င်) - ဘာလချောင်ကြော်
鱼露 yú lù
ယွီလု - ငါးငံပြာရည်
咸鱼 xián yú
ရှန်းယွီ - ငါးပိကောင်
鱼虾酱 yú xiā jiàng
ယွီရှားကျန့်(င်) - ငါးပိ။ ငပိ
虾酱 xiā jiàng
ရှားကျန့်(င်) - စိမ်းစားငါးပိ။ ငပိစိမ်းစား
烤虾酱 kǎo xiā jiàng
ခေါင်ရှားကျန့်(င်) - ငါးပိဖုတ်။ ငပိဖုတ်
油辣鱼虾松 yóu là yú xiā sōng
ယိုလာ့ယွီရှားစုန်း(င်) - ငါးပိကြော်။ ငပိကြော်
ငပိရညျ၊ တို့စရာ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
မွနျမာလူမြိုးတှကေ ထမငျးဝိုငျးမှာ ငပိရညျ၊ တို့စရာလေးတှေ စုံစုံလငျလငျပါမှ ထမငျးမွိနျတတျကွပါတယျ။
ကနျြ့hကနျြ့(ငျ) - ငါးပိရညျ။ ငပိရညျ
ပနျ့ရှူh ရှူးhဆိုကျ - တို့စရာ အရှကျပွုတျ
ကြာhရှားကနျြ့(ငျ) - ငါးပိကွျော။ ငပိကွျော
ကြာhကနျးရှားစုနျး(ငျ) - ဘာလခြောငျကွျော
ယှီလု - ငါးငံပွာရညျ
ရှနျးယှီ - ငါးပိကောငျ
ယှီရှားကနျြ့(ငျ) - ငါးပိ။ ငပိ
ရှားကနျြ့(ငျ) - စိမျးစားငါးပိ။ ငပိစိမျးစား
ခေါငျရှားကနျြ့(ငျ) - ငါးပိဖုတျ။ ငပိဖုတျ
ယိုလာ့ယှီရှားစုနျး(ငျ) - ငါးပိကွျော။ ငပိကွျော
ကြာဇံချက် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
10:00 AM C-Word , Chinese
ကြာဇံချက် ပူပူလေးကတော့ မိုးအေးအေးနဲ့ သောက်လို့ကောင်းတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ သင်တို့လည်း ကြိုက်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
粉丝 fěn sī
ဖဲင်fစီး - ကြာဆံ အနုစား
ကျီးရို့r - ကြက်သား
ထန်း(င်) - ဟင်းရည်။ အရည်။ စွပ်ပြုတ်
粉丝鸡肉汤 fěn sī jī ròu tāng
ဖဲင်fစီး ကျီးရို့rထန်း(င်) - ကြာဇံချက်
★ အဓိက ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ
鸡肉丝 jī ròu sī
ကျီးရို့rစီး - ကြက်သားမျှင်
黑木耳 hēi mù ěr
ဟေးမုအဲယ်r - ကြွက်နားရွက်မှို
豆腐干 dòu fu gān
တို့ဖုfကန်း - တို့ဟူးခြောက်
腐竹 fǔ zhú
ဖူfကျူh - ပဲလိပ်
မုအဲယ်r - မှိုခြောက်
鹌鹑蛋 ān chún dàn
အန်းချွင်hတန့် - ငုံးဥ
ကွာဇံခကျြ - တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
ကွာဇံခကျြ ပူပူလေးကတော့ မိုးအေးအေးနဲ့ သောကျလို့ကောငျးတဲ့ အစားအစာတဈမြိုးပါ။ သငျတို့လညျး ကွိုကျကွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။
ဖဲငျfစီး - ကွာဆံ အနုစား
ကြီးရို့r - ကွကျသား
ထနျး(ငျ) - ဟငျးရညျ။ အရညျ။ စှပျပွုတျ
ဖဲငျfစီး ကြီးရို့rထနျး(ငျ) - ကွာဇံခကျြ
★ အဓိက ပါဝငျသော ပစ်စညျးမြား
ကြီးရို့rစီး - ကွကျသားမြှငျ
ဟေးမုအဲယျr - ကွှကျနားရှကျမှို
တို့ဖုfကနျး - တို့ဟူးခွောကျ
ဖူfကြူh - ပဲလိပျ
မုအဲယျr - မှိုခွောကျ
အနျးခြှငျhတနျ့ - ငုံးဥ
ကြာဆန်ချက် - ကြာဆံချက် - ကြာဇံချက် - ကွာဆနျခကျြ - ကွာဆံခကျြ - ကွာဇံခကျြ
ဘယာကြော် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
အိန္ဒိယအစားအစာ ဆီကြော်မုန့်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဘယာကြော်ကိုတော့ အားလုံး စားဖူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
鹰嘴豆 yīng zuǐ dòu
ယင်း(င်)ဇွေzတို့ - ကုလားပဲ
နီ - ညက်နေအောင် ထောင်းထားခြင်း
丸子 wán zi
ဝမ်ဇစ်z - အလုံး
鹰嘴豆泥丸子 yīng zuǐ dòu ní wán zi
ယင်း(င်)ဇွေzတို့နီဝမ်ဇစ်z - ဘယာကြော်
★ ဆက်စပ် ဝေါဟာရများ
油炸点心 yóu zhá diǎn xīn
ယိုးကျာhတျန်ရှင်း - ဆီကြော်မုန့်
咖喱角 gā lí jiǎo
ကားလီးကျောင် - စမူဆာ
咖喱角沙拉 gā lí jiǎo shā lā
ကားလီးကျောင် ရှားhလား - စမူဆာသုပ်
蒸豆 zhēng dòu
ကျဲင်းh(င်)တို့ - ပဲပြုတ်
煮鹰嘴豆 zhǔ yīng zuǐ dòu
ကျူh ယင်း(င်)ဇွေzတို့ - ပဲပြုတ်
ဘယာကွျော - တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
အိန်ဒိယအစားအစာ ဆီကွျောမုနျ့တဈမြိုးဖွဈတဲ့ ဘယာကွျောကိုတော့ အားလုံး စားဖူးကွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။
ယငျး(ငျ)ဇှေzတို့ - ကုလားပဲ
နီ - ညကျနအေောငျ ထောငျးထားခွငျး
ဝမျဇဈz - အလုံး
ယငျး(ငျ)ဇှေzတို့နီဝမျဇဈz - ဘယာကွျော
★ ဆကျစပျ ဝေါဟာရမြား
ယိုးကြာhတနျြရှငျး - ဆီကွျောမုနျ့
ကားလီးကြောငျ - စမူဆာ
ကားလီးကြောငျ ရှားhလား - စမူဆာသုပျ
ကြဲငျးh(ငျ)တို့ - ပဲပွုတျ
ကြူh ယငျး(ငျ)ဇှေzတို့ - ပဲပွုတျ
ဘယာကြော် - ဗယာကြော် - ဘယာကွျော - ဗယာကွျော
9:19 AM C-Word , Chinese
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ပြုလုပ်ပြီးတိုင်း သမ္မာဒေဝ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များနဲ့တကွ ၃၁ ဘုံသားတွေကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေလေ့ရှိကြပါတယ်။
天帝释 tiān dì shì
ထျန်းတိရှစ်h - သိကြားမင်း
大梵天王 dà fàn tiān wáng
တာ့ဖန့်fထျန်းဝမ်(င်) - ဗြဟ္မာမင်း
阎王 yán wáng
ယန်းဝမ်(င်) - ယမမင်း
四天王 sì tiān wáng
စွတ်ထျန်းဝမ်(င်) - စတုမဟာရာဇ် နတ်မင်းကြီးလေးပါး
持国天王 chí guó tiān wáng
ဓတရဋ္ဌ နတ်မင်းကြီး ( အရှေ့အရပ် )
广目天王 guǎng mù tiān wáng
ဝိရူပက္ခ နတ်မင်းကြီး ( အနောက်အရပ် )
增长天王 zēng zhǎng tiān wáng
ဝိရူဠက နတ်မင်းကြီး ( တောင်အရပ် )
多闻天王 duō wén tiān wáng
ကုဝေရ နတ်မင်းကြီး ( မြောက်အရပ် )
善神 shàn shén
ရှန့်hရှဲင်h - သမ္မာဒေဝနတ်
龙王 lóng wáng
လုံး(င်)ဝမ်(င်) - နဂါးမင်း
大鹏王 dà péng wáng
တာ့ဖဲင်း(င်)ဝမ်(င်) - ဂဠုန်မင်း
守财神 shǒu cái shén
ရှိုhဆိုင်းရှဲင်h - ဥစ္စာစောင့်။ သိုက်နန်းရှင်
护家神 hù jiā shén
ဟုကျားရှဲင်h - အိမ်စောင့်နတ်
ထူတိရှဲင်h - မြေစောင့်နတ်။ ဘုမ္မစိုး
护林神 hù lín shén
ဟုလင်းရှဲင်h - တောစောင့်နတ်
护山神 hù shān shén
ဟုရှန်းhရှဲင်h - တောင်စောင့်နတ်
护身之神 hù shēn zhī shén
ဟုရှဲင်းhကျီးhရှဲင်h - ကိုယ်စောင့်နတ်
树神 shù shén
ရှုhရှဲင်h - ရုက္ခစိုး
天神 tiān shén
ထျန်းရှဲင်h - အာကာသစိုး
ရှန်းရဲင်r - ဝိဇ္ဇာ
瑜伽行者 yù jiā xíng zhě
ယွိကျားရှင်း(င်)ကျယ်h - ဇော်ဂျီ
修道士 xiū dào shì
ရှိုးတောက်ရှစ်h - တပသီ
魔王 mó wáng
မောဝမ်(င်) - မာရ်နတ်
妖魔 yāo mó
ယောင်းမော် - ဘီလူး။ ကုမ္ဘာန်။ ယက္ခ
饿鬼 è guǐ
အဲာ့ကွေ - ပြိတ္တာ
阿修罗 ā xiū luó
အားရှိုးလော် - အသူရကာယ်
恶道鬼 è dào guǐ
အဲာ့တောက်ကွေ - အပါယ်ဘုံသား
妖魔鬼怪 yāo mó guǐ guài
ယောင်းမောကွေကွိုက် - နာနာဘာဝ
妖怪 yāo guài
ယောင်းကွိုက် - မကောင်းဆိုးဝါး။ မိစ္ဆာ
土妖 tǔ yāo
ထူယောင်း - မြေဖုတ်ဘီလူး
ကွေ - တစ္ဆေသရဲ
恶鬼 è guǐ
အဲာ့ကွေ - အစိမ်းသရဲ
小妖 xiǎo yāo
ရှောင်ယောင်း - မှင်စာ
ထူယောင်း - ကျတ်
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှဟော ကောငျးမှုကုသိုလျတှေ ပွုလုပျပွီးတိုငျး သမ်မာဒဝေ နတျကောငျးနတျမွတျမြားနဲ့တကှ ၃၁ ဘုံသားတှကေို မတ်ေတာပို့ အမြှဝလေရှေိ့ကွပါတယျ။
ထနျြးတိရှဈh - သိကွားမငျး
တာ့ဖနျ့fထနျြးဝမျ(ငျ) - ဗွဟ်မာမငျး
ယနျးဝမျ(ငျ) - ယမမငျး
စှတျထနျြးဝမျ(ငျ) - စတုမဟာရာဇျနတျမငျးကွီး လေးပါး
ဓတရဋ်ဌ နတျမငျးကွီး ( အရှအေ့ရပျ )
ဝိရူပက်ခ နတျမငျးကွီး ( အနောကျအရပျ )
ဝိရူဠက နတျမငျးကွီး ( တောငျအရပျ )
ကုဝရေ နတျမငျးကွီး ( မွောကျအရပျ )
ရှနျ့hရှဲငျh - သမ်မာဒဝေနတျ
လုံး(ငျ)ဝမျ(ငျ) - နဂါးမငျး
တာ့ဖဲငျး(ငျ)ဝမျ(ငျ) - ဂဠုနျမငျး
ရှိုhဆိုငျးရှဲငျh - ဥစ်စာစောငျ့။ သိုကျနနျးရှငျ
ဟုကြားရှဲငျh - အိမျစောငျ့နတျ
ထူတိရှဲငျh - မွစေောငျ့နတျ။ ဘုမ်မစိုး
ဟုလငျးရှဲငျh - တောစောငျ့နတျ
ဟုရှနျးhရှဲငျh - တောငျစောငျ့နတျ
ဟုရှဲငျးhကြီးhရှဲငျh - ကိုယျစောငျ့နတျ
ရှုhရှဲငျh - ရုက်ခစိုး
ထနျြးရှဲငျh - အာကာသစိုး
ရှနျးရဲငျr - ဝိဇ်ဇာ
ယှိကြားရှငျး(ငျ)ကယျြh - ဇျောဂြီ
ရှိုးတောကျရှဈh - တပသီ
မောဝမျ(ငျ) - မာရျနတျ
ယောငျးမျော - ဘီလူး။ ကုမ်ဘာနျ။ ယက်ခ
အဲာ့ကှေ - ပွိတ်တာ
အားရှိုးလျော - အသူရကာယျ
အဲာ့တောကျကှေ - အပါယျဘုံသား
ယောငျးမောကှကှေိုကျ - နာနာဘာဝ
ယောငျးကှိုကျ - မကောငျးဆိုးဝါး။ မိစ်ဆာ
ထူယောငျး - မွဖေုတျဘီလူး
ကှေ - တစ်ဆသေရဲ
အဲာ့ကှေ - အစိမျးသရဲ
ရှောငျယောငျး - မှငျစာ
ထူယောငျး - ကတျြ
ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲ - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
7:14 AM C-Word , Chinese
ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပါတယ်။
缅历二月 miǎn lì èr yuè
မြန်လိ အဲာ့rယွဲ့ - ကဆုန်လ
格宋月 gé sòng yuè
ကဲယ်စုန့်(င်)ယွဲ့ - ကဆုန်လ
[ မြန်မာအသံထွက် ဖလှယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ]
月圆日 yuè yuán rì
ယွဲ့ယွမ်ရွတ်r - လပြည့်နေ့
卫塞节 wèi sài jié
ဝေ့စိုက်ကျယ် - ဗုဒ္ဓနေ့
佛陀日 fó tuó rì
ဖောfထော်ရွတ်r - ဗုဒ္ဓနေ့
浴榕节 yù róng jié
ယွိရုံးr(င်)ကျယ် - ညောင်ရေသွန်းပွဲ
榕树浇水节 róng shù jiāo shuǐ jié
ရုံr(င်)ရှုh ကျောင်းရွှေhကျယ် - ညောင်ရေသွန်းပွဲ
榕树 róng shù
ရုံr(င်)ရှုh - ညောင်ပင်
菩提树 pú tí shù
ဖူးထီရှုh - ဗောဓိညောင်ပင်
菩提座 pú tí zuò
ဖူးထီဇော့z - ဗောဓိပလ္လင်
ကဆုန်လပြည့်နေ့ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေကတော့ ဗျာဒိတ်၊ ဖွားမြင်၊ ဗောဓိပင်၊ စံဝင် နိဗ္ဗာန်နန်း ဆိုတဲ့အတိုင်း သုံးလောကထွတ်ထား မြတ်စွာဘုရားဟာ
စတဲ့ ထူးခြားချက်လေးမျိုးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒီလို ထူးခြားချက်လေးမျိုးနဲ့ ပြည့်စုံနေတာကြောင့် ဒီနေ့ကို ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့လို့ အမွှန်းတင်ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
听取预言日 tīng qǔ yù yán rì
ထင်း(င်)ချွီယွိယန်ရွတ်r - ဗျာဒိတ်ခံယူသောနေ့
诞生日 dàn shēng rì
တန့်ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r - ဖွားမြင်တော်မူသောနေ့
成佛日 chéng fó rì
ချဲင်းh(င်)ဖော်fရွတ်r - ဘုရားဖြစ်တော်မူသောနေ့
涅槃日 niè pán rì
နျဲ့ဖန်ရွတ်r - ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောနေ့
Yuàn fójiào shìyè xìngwàng fādá.
ယွမ့် ဖော်fကျောက် ရှစ်hယဲ့ ရှင့်(င်)ဝမ့်(င်) ဖားfတာ
ဗုဒ္ဓသာသနာ အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ပါစေ။
Fójiào hóngyáng guāngdà.
ဖော်fကျောက် ဟုန်း(င်)ယန်(င်) ကွမ်း(င်)တာ့
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာ ရောင်ဝါနေသို့ လင်းပါစေ။
ကဆုနျညောငျရသှေနျးပှဲ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
ကဆုနျလပွညျ့နဟေ့ာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှရေဲ့ နထေူ့းနမွေ့တျ တဈနဖွေ့ဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာ ညောငျရသှေနျးပှဲတျောကို ကငျြးပကွပါတယျ။
မွနျလိ အဲာ့rယှဲ့ - ကဆုနျလ
ကဲယျစုနျ့(ငျ)ယှဲ့ - ကဆုနျလ
[ မွနျမာအသံထှကျ ဖလှယျထားခွငျး ဖွဈပါသညျ ]
ယှဲ့ယှမျရှတျr - လပွညျ့နေ့
ဝစေို့ကျကယျြ - ဗုဒ်ဓနေ့
ဖျောfထျောရှတျr - ဗုဒ်ဓနေ့
ယှိရုံးr(ငျ)ကယျြ - ညောငျရသှေနျးပှဲ
ရုံr(ငျ)ရှုh ကြောငျးရှေhကယျြ - ညောငျရသှေနျးပှဲ
ရုံr(ငျ)ရှုh - ညောငျပငျ
ဖူးထီရှုh - ဗောဓိညောငျပငျ
ဖူးထီဇော့z - ဗောဓိပလ်လငျ
ကဆုနျလပွညျ့နရေဲ့ ထူးခွားခကျြတှကေတော့ ဗြာဒိတျ၊ ဖှားမွငျ၊ ဗောဓိပငျ၊ စံဝငျ နိဗ်ဗာနျနနျး ဆိုတဲ့အတိုငျး သုံးလောကထှတျထား မွတျစှာဘုရားဟာ
စတဲ့ ထူးခွားခကျြလေးမြိုးနဲ့ တိုကျဆိုငျနပေါတယျ။ ဒီလို ထူးခွားခကျြလေးမြိုးနဲ့ ပွညျ့စုံနတောကွောငျ့ ဒီနကေို့ ကဆုနျလပွညျ့ ဗုဒ်ဓနလေို့ အမှနျးတငျချေါဆိုကွပါတယျ။
ထငျး(ငျ)ခြှီယှိယနျရှတျr - ဗြာဒိတျခံယူသောနေ့
တနျ့ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr - ဖှားမွငျတျောမူသောနေ့
ခြဲငျးh(ငျ)ဖျောfရှတျr - ဘုရားဖွဈတျောမူသောနေ့
နြဲ့ဖနျရှတျr - ပရိနိဗ်ဗာနျစံတျောမူသောနေ့
ယှမျ့ ဖျောfကြောကျ ရှဈhယဲ့ ရှငျ့(ငျ)ဝမျ့(ငျ) ဖားfတာ
ဗုဒ်ဓသာသနာ အဓှနျ့ရှညျ တညျတံ့ပါစေ။
ဖျောfကြောကျ ဟုနျး(ငျ)ယနျ(ငျ) ကှမျး(ငျ)တာ့
ဗုဒ်ဓမွတျစှာ သာသနာ ရောငျဝါနသေို့ လငျးပါစေ။
3:31 AM C-Word , Chinese
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပန်းအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၊ အရောင်အသွေး၊ အနံ့အဆင်းပေါင်းစုံ ရှိကြပါတယ်။ ပန်းအမည်များကို တရုတ်လို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
一串红 yí chuàn hóng
ယီချွမ့်hဟုန်(င်) - ကလျာနီပန်း
睡莲 shuì lián
ရွှေ့hလျန် - ကုမုဒြာကြာပန်း
铁力木 tiě lì mù
ထျယ်လိမု - ကံ့ကော်ပန်း
牵牛花 qiān niú huā
ချန်းနျိုဟွား - ကန်စွန်းပန်း။ ခေါင်းလောင်းပန်း
ယွိကျင်းရှမ်း(င်) - ကျူးလစ်ပန်း
莲花 lián huā
လျန်ဟွား - ကြာပန်း
荷花 hé huā
ဟဲယ်ဟွား - ကြာပန်း
子午莲 zǐ wǔ lián
ဇီးzဝူလျန် - ကြာပုဏ္ဏရိတ်ပန်း
鸡冠花 jī guān huā
ကျီးကွမ်းဟွား - ကြက်မောက်ပန်း
阿拉伯茉莉 ā lā bó mò lì
အားလားပေါ်မော့လိ - ကြက်ရုန်းပန်း
秋海棠 qiū hǎi táng
ချိုးဟိုင်ထန်(င်) - ကြွေပန်း
香榄 xiāng lǎn
ရှမ်း(င်)လန် - ခရေပန်း
ဇီzလောလန် - ခရမ်းရင့်ရောင် မြင်းခွာပန်း
秋麒麟花 qiū qí lín huā
ချိုးချီးလင်ဟွား - ခိုင်ရွှေဝါပန်း
木槿属 mù jǐn shǔ
မုကျင်းရှူh - ခေါင်ရမ်းပန်း
朱槿 zhū jǐn
ကျူးhကျင် - ခေါင်ရမ်းပန်း
风铃草 fēng líng cǎo
ဖဲင်းf(င်)လင်း(င်)ဆောင် - ခေါင်းလောင်းပန်း
喇叭花 lǎ ba huā
လာပါးဟွား - ခေါင်းလောင်းပန်း
ယွိကျင်းရှမ်း(င်) - ခတ္တာပန်း
樱桃 yīng táo
ယင်း(င်)ထောင် - ချယ်ရီပန်း
铁线莲 tiě xiàn lián
ထျယ်ရှန့်လျန် - ခွာညိုပန်း
山柰 shān nài
ရှန်းhနိုက် - ဂမုန်း
拖鞋兰 tuō xié lán
ထောရှဲလန် - ဂမုန်းသစ်ခွ
菊花 jú huā
ကျွီဟွား - ဂန္ဓမာပန်း
樱花 yīng huā
ယင်း(င်)ဟွား - ဂျပန် ချယ်ရီပန်း။ ဆာကုရ
金链花 jīn liàn huā
ကျင်းလျန့်ဟွား - ငုပန်း
黄金雨 huáng jīn yǔ
ဟွမ်(င်)ကျင်းယွီ - ငုဝါပန်း
白草果 bái cǎo guǒ
ပိုင်းဆောင်ကော် - ငွေပန်း
白玉兰 bái yù lán
ပိုင်ယွိလန် - စကားဖြူပန်း
黄玉兰 huáng yù lán
ဟွမ်(င်)ယွိလန် - စကားဝါပန်း
玉兰 yù lán
ယွိလန် - စံကားပန်း
茉莉花 mò lì huā
မော့လိဟွား - စံပယ်ပန်း
三角梅 sān jiǎo méi
စန်းကျောင်မေ - စက္ကူပန်း
纸花 zhǐ huā
ကျီhဟွား - စက္ကူပန်း
金凤花 jīn fèng huā
ကျင်းဖဲင့်f(င်)ဟွား - စိန်ပန်း
黄金菊 huáng jīn jú
ဟွမ်(င်)ကျင်းကျွီ - စိန်ခြယ်ပန်း
ထန်ရှမ်း(င်) - စန္ဒကူးပန်း
雪莲 xuě lián
ရွှယ်လျန် - ဆီးနှင်းတောင် ကြာပဒုမ္မာ
马鞭草 mǎ biān cǎo
မာပြန်းဆောင် - ဆောင်တော်ကူးပန်း
圆锥飞蛾藤 yuán zhuī fēi é téng
ယွမ်ကျွေးhဖေးfအဲယ်းထဲင်(င်) - ဆောင်တော်ကူးပန်း
杜鹃花 dù juān huā
တုကျွမ်းဟွား - ဇလပ်ပန်း
栀子 zhī zi
ကျီးhဇစ်z - ဇီဇ၀ါပန်း
康乃馨 kāng nǎi xīn
ခန်း(င်)နိုင်ရှင်း - ဇော်မွှားပန်း
小茉莉 xiǎo mò lì
ရှောင်မော့လိ - ဇွန်ပန်း
夜來香 yè lái xiāng
ယဲ့လိုင်ရှမ်း(င်) - ညမွှေးပန်း
鸡蛋花 jī dàn huā
ကျီးတန့်ဟွား - တရုတ်စကားပန်း
栀子花 zhī zi huā
ကျီးhဇစ်zဟွား - တရုတ်စကားပန်း
မေဟွား - တရုတ်ဇီးပန်း
水仙花 shuǐ xiān huā
ရွှေhရှန်းဟွား - တရုတ်နေမင်းဂမုန်းပန်း
月季花 yuè jì huā
ယွဲ့ကျိဟွား - တရုတ်နှင်းဆီပန်း
茶花 chá huā
ချာhဟွား - တရုတ်ဖယောင်းပန်း
ရှန်းhချာhဟွား - တရုတ်ဖယောင်းပန်း
野蔷薇 yě qiáng wēi
ယယ်ချန်(င်)ဝေး - တောနှင်းဆီပန်း။ နှင်းဆီအရိုင်း
常青藤 cháng qīng téng
ချန်h(င်)ချင်း(င်)ထဲင်(င်) - တိုက်ကပ်နွယ်ပန်း
珊瑚藤 shān hú téng
ရှန်းhဟူးထဲင်(င်) - တိုက်ပန်း
金盏花 jīn zhǎn huā
ကျင်းကျန်hဟွား - ထပ်တစ်ရာပန်း
雏菊 chú jú
ချူးhကျွီ - ဒေစီပန်း
金钱花 jīn qián huā
ကျင်းချန်ဟွား - ဒေစီပန်း
大丽花 dà lì huā
တာ့လိဟွား - ဒေလီယာပန်း
天竺牡丹 tiān zhú mǔ dān
ထျန်းကျူးhမူတန်း - ဒေလီယာပန်း
艾草 ài cǎo
အိုက်ဆောင် - ဒေါနပန်း
凤仙花 fèng xiān huā
ဖဲင့်f(င်)ရှန်းဟွား - ဒန်းပန်း
鱼尾菊 yú wěi jú
ယွီးဝေကျွှီ - ဒေါင်းဖန်ဝါပန်း
金鱼草 jīn yú cǎo
ကျင်းယွီးဆောင် - နဂါးခေါင်းပန်း
向日葵 xiàng rì kuí
ရှန့်(င်)ရွတ်rခွေ - နေကြာပန်း
ကျင်းဟဲယ်ဟွမ်း - နန်းလုံးကြိုင်ပန်း
迎春花 yíng chūn huā
ယင်(င်)ချွင်းhဟွား - နွေဦးကြိုပွင့်ဝါပန်း
夹竹桃 jiā zhú táo
ကျားကျူးhထောင် - နွယ်သာကီပန်း
မေကွေးဟွား - နှင်းဆီပန်း
ပိုင်ဟဲယ် - နှင်းပန်း
山丹 shān dān
ရှန်းhတန်း - နှင်းပန်းနီ
紫檀花 zǐ tán huā
ဇီzထန်ဟွား - ပိတောက်ပန်း
牡丹 mǔ dān
မူတန်း - ပီအိုနီပန်း
芍药 sháo yao
ရှောင်hယောက် - ပင်ပျော့ပီအိုနီပန်း
桂花 guì huā
ကွေ့ဟွား - ပင်လုံးကြိုင်ပန်း။ လုလင်ကျော်ပန်း
舞花姜属 wǔ huā jiāng shǔ
ဝူဟွားကျန်း(င်)ရှူh - ပန်းတိမ်ငိုပန်း
红掌 hóng zhǎng
ဟုန်း(င်)ကျန်h(င်) - ပိန်းပန်း
红厚壳 hóng hòu ké
ဟုန်(င်)ဟို့ခဲယ် - ပုန်းညက်ပန်း
龙船花 lóng chuán huā
လုံး(င်)ချွမ်hဟွား - ပုဏ္ဏရိတ်ပန်း
ကျင်းယင်ဟွား - ပျားရည်စုပ်ပန်း
石斛属 shí hú shǔ
ရှီhဟူးရှူh - ဖယောင်းပန်း
水葫芦 shuǐ hú lu
ရွှေhဟူးလူ - ဗေဒါပန်း
美人蕉 měi rén jiāo
မေရဲင်rကျောင်း - ဗုဒ္ဓသရဏပန်း
ယွီးမေရဲင်r - ဘိန်းပန်းအနီ
西班牙茉莉 xī bān yá mò lì
ရှီးပန်းယာမော့လိ - မလေးပန်း
紫菀 zǐ wǎn
ဇီးzဝမ် - မေမြို့ပန်း
柳花 liǔ huā
လျိုဟွား - မိုးမခပန်း
挑花 táo huā
ထောင်ဟွား - မက်မုံပန်း
素馨 sù xīn
စုရှင်း - မြတ်လေးပန်း
九里香 jiǔ lǐ xiāng
ကျိုးလီရှမ်း(င်) - ယုဇနပန်း
香客来 xiān kè lái
ရှန်းခဲါ့လိုင် - ယုန်နားရွက်ပန်း
变叶木 biàn yè mù
ပြန့်ယဲ့မု - ရွက်လှပန်း
姜花 jiāng huā
ကျန်း(င်)ဟွား - ရွှေပန်း
လာပါးဟွား - သခွတ်ပန်း
黄毛石豆兰 huáng máo shí dòu lán
ဟွမ်း(င်)မောင်ရှီhတို့လန် - သဇင်ပန်း
蒲桃 pú táo
ဖူးထောင် - သပြေပန်း
琼崖海棠 qióng yá hǎi táng
ချုံး(င်)ယားဟိုင်ထန်(င်) - သရဖီပန်း
华贵璎珞木 huá guì yīng luò mù
ဟွာကွေ့ယင်း(င်)လော့မု - သော်ကပန်း
三色槿 sān sè jǐn
စန်းစဲ့ကျင် - သုံးရောင်လိပ်ပြာပန်း
兰花 lán huā
လန်ဟွား - သစ်ခွပန်း
剑兰 jiàn lán
ကျန့်လန် - သစ္စာပန်း
娑罗 suō luó
စောလော် - အင်ကြင်ပန်း
烟筒花 yān tǒng huā
ယန်းထုံ(င်)ဟွား - ဧကရာဇ်ပန်း
ကမ်ဘာပျေါမှာ ပနျးအမြိုးအစားမြားစှာရှိပွီး၊ အရောငျအသှေး၊ အနံ့အဆငျးပေါငျးစုံ ရှိကွပါတယျ။ ပနျးအမညျမြားကို တရုတျလို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့။
ယီခြှမျ့hဟုနျ(ငျ) - ကလြာနီပနျး
ရှေ့hလနျြ - ကုမုဒွာကွာပနျး
ထယျြလိမု - ကံ့ကျောပနျး
ခနျြးနြိုဟှား - ကနျစှနျးပနျး။ ခေါငျးလောငျးပနျး
ယှိကငျြးရှမျး(ငျ) - ကြူးလဈပနျး
လနျြဟှား - ကွာပနျး
ဟဲယျဟှား - ကွာပနျး
ဇီးzဝူလနျြ - ကွာပုဏ်ဏရိတျပနျး
ကြီးကှမျးဟှား - ကွကျမောကျပနျး
အားလားပျေါမော့လိ - ကွကျရုနျးပနျး
ခြိုးဟိုငျထနျ(ငျ) - ကွှပေနျး
ရှမျး(ငျ)လနျ - ခရပေနျး
ဇီzလောလနျ - ခရမျးရငျ့ရောငျ မွငျးခှာပနျး
ခြိုးခြီးလငျဟှား - ခိုငျရှဝေါပနျး
မုကငျြးရှူh - ခေါငျရမျးပနျး
ကြူးhကငျြ - ခေါငျရမျးပနျး
ဖဲငျးf(ငျ)လငျး(ငျ)ဆောငျ - ခေါငျးလောငျးပနျး
လာပါးဟှား - ခေါငျးလောငျးပနျး
ယှိကငျြးရှမျး(ငျ) - ခတ်တာပနျး
ယငျး(ငျ)ထောငျ - ခယျြရီပနျး
ထယျြရှနျ့လနျြ - ခှာညိုပနျး
ရှနျးhနိုကျ - ဂမုနျး
ထောရှဲလနျ - ဂမုနျးသဈခှ
ကြှီဟှား - ဂန်ဓမာပနျး
ယငျး(ငျ)ဟှား - ဂပြနျ ခယျြရီပနျး။ ဆာကုရ
ကငျြးလနျြ့ဟှား - ငုပနျး
ဟှမျ(ငျ)ကငျြးယှီ - ငုဝါပနျး
ပိုငျးဆောငျကျော - ငှပေနျး
ပိုငျယှိလနျ - စကားဖွူပနျး
ဟှမျ(ငျ)ယှိလနျ - စကားဝါပနျး
ယှိလနျ - စံကားပနျး
မော့လိဟှား - စံပယျပနျး
စနျးကြောငျမေ - စက်ကူပနျး
ကြီhဟှား - စက်ကူပနျး
ကငျြးဖဲငျ့f(ငျ)ဟှား - စိနျပနျး
ဟှမျ(ငျ)ကငျြးကြှီ - စိနျခွယျပနျး
ထနျရှမျး(ငျ) - စန်ဒကူးပနျး
ရှယျလနျြ - ဆီးနှငျးတောငျ ကွာပဒုမ်မာ
မာပွနျးဆောငျ - ဆောငျတျောကူးပနျး
ယှမျကြှေးhဖေးfအဲယျးထဲငျ(ငျ) - ဆောငျတျောကူးပနျး
တုကြှမျးဟှား - ဇလပျပနျး
ကြီးhဇဈz - ဇီဇဝါပနျး
ခနျး(ငျ)နိုငျရှငျး - ဇျောမှားပနျး
ရှောငျမော့လိ - ဇှနျပနျး
ယဲ့လိုငျရှမျး(ငျ) - ညမှေးပနျး
ကြီးတနျ့ဟှား - တရုတျစကားပနျး
ကြီးhဇဈzဟှား - တရုတျစကားပနျး
မဟှေား - တရုတျဇီးပနျး
ရှေhရှနျးဟှား - တရုတျနမေငျးဂမုနျးပနျး
ယှဲ့ကြိဟှား - တရုတျနှငျးဆီပနျး
ခြာhဟှား - တရုတျဖယောငျးပနျး
ရှနျးhခြာhဟှား - တရုတျဖယောငျးပနျး
ယယျခနျြ(ငျ)ဝေး - တောနှငျးဆီပနျး။ နှငျးဆီအရိုငျး
ခနျြh(ငျ)ခငျြး(ငျ)ထဲငျ(ငျ) - တိုကျကပျနှယျပနျး
ရှနျးhဟူးထဲငျ(ငျ) - တိုကျပနျး
ကငျြးကနျြhဟှား - ထပျတဈရာပနျး
ခြူးhကြှီ - ဒစေီပနျး
ကငျြးခနျြဟှား - ဒစေီပနျး
တာ့လိဟှား - ဒလေီယာပနျး
ထနျြးကြူးhမူတနျး - ဒလေီယာပနျး
အိုကျဆောငျ - ဒေါနပနျး
ဖဲငျ့f(ငျ)ရှနျးဟှား - ဒနျးပနျး
ယှီးဝကြှေီ - ဒေါငျးဖနျဝါပနျး
ကငျြးယှီးဆောငျ - နဂါးခေါငျးပနျး
ရှနျ့(ငျ)ရှတျrခှေ - နကွောပနျး
ကငျြးဟဲယျဟှမျး - နနျးလုံးကွိုငျပနျး
ယငျ(ငျ)ခြှငျးhဟှား - နှဦေးကွိုပှငျ့ဝါပနျး
ကြားကြူးhထောငျ - နှယျသာကီပနျး
မကှေေးဟှား - နှငျးဆီပနျး
ပိုငျဟဲယျ - နှငျးပနျး
ရှနျးhတနျး - နှငျးပနျးနီ
ဇီzထနျဟှား - ပိတောကျပနျး
မူတနျး - ပီအိုနီပနျး
ရှောငျhယောကျ - ပငျပြော့ပီအိုနီပနျး
ကှဟှေ့ား - ပငျလုံးကွိုငျပနျး။ လုလငျကြျောပနျး
ဝူဟှားကနျြး(ငျ)ရှူh - ပနျးတိမျငိုပနျး
ဟုနျး(ငျ)ကနျြh(ငျ) - ပိနျးပနျး
ဟုနျ(ငျ)ဟို့ခဲယျ - ပုနျးညကျပနျး
လုံး(ငျ)ခြှမျhဟှား - ပုဏ်ဏရိတျပနျး
ကငျြးယငျဟှား - ပြားရညျစုပျပနျး
ရှီhဟူးရှူh - ဖယောငျးပနျး
ရှေhဟူးလူ - ဗဒေါပနျး
မရေဲငျrကြောငျး - ဗုဒ်ဓသရဏပနျး
ယှီးမရေဲငျr - ဘိနျးပနျးအနီ
ရှီးပနျးယာမော့လိ - မလေးပနျး
ဇီးzဝမျ - မမွေို့ပနျး
လြိုဟှား - မိုးမခပနျး
ထောငျဟှား - မကျမုံပနျး
စုရှငျး - မွတျလေးပနျး
ကြိုးလီရှမျး(ငျ) - ယုဇနပနျး
ရှနျးခဲါ့လိုငျ - ယုနျနားရှကျပနျး
ပွနျ့ယဲ့မု - ရှကျလှပနျး
ကနျြး(ငျ)ဟှား - ရှပေနျး
လာပါးဟှား - သခှတျပနျး
ဟှမျး(ငျ)မောငျရှီhတို့လနျ - သဇငျပနျး
ဖူးထောငျ - သပွပေနျး
ခြုံး(ငျ)ယားဟိုငျထနျ(ငျ) - သရဖီပနျး
ဟှာကှယေ့ငျး(ငျ)လော့မု - သျောကပနျး
စနျးစဲ့ကငျြ - သုံးရောငျလိပျပွာပနျး
လနျဟှား - သဈခှပနျး
ကနျြ့လနျ - သစ်စာပနျး
စောလျော - အငျကွငျပနျး
ယနျးထုံ(ငျ)ဟှား - ဧကရာဇျပနျး
ပန်း - ပန်းများ - ပန်းအမည် - ပန်းနာမည် - ပန်းအမျိုးမျိုး - ပန်းအခေါ်အဝေါ် - ပနျး - ပနျးမြား - ပနျးအမညျ - ပနျးနာမညျ - ပနျးအမြိုးမြိုး - ပနျးအချေါအဝျေါ - Flower - flower - Flowers - flowers - hua1 - hua - huā - 花
9:55 AM C-Word , Chinese
စားသောက်ဆိုင်တွေ ဒါမှမဟုတ် လမ်းဘေးဈေးတန်းတွေမှာ လူကြိုက်များတဲ့ အသုပ်အမျိုးမျိုးရဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
拌咸茶 bàn xián chá
ပန့်ရှန်းချာh - လက်ဘက်သုပ်။ လက်ဖက်သုပ်
拌姜丝 bàn jiāng sī
ပန့်ကျန်း(င်)စီး - ဂျင်းသုပ်
拌面条 bàn miàn tiáo
ပန့်မြန့်ထျောင် - ခေါက်ဆွဲသုပ်
韩式拌面 hán shì bàn miàn
ဟန်ရှစ်h ပန့်မြန့်ထျောင် - ကိုရီးယား ခေါက်ဆွဲသုပ်
拌米粉 bàn mǐ fěn
ပန့်မီးဖဲင်f - ကြာဇံသုပ်
拌色拉 bàn sè lā
ပန့်စဲ့လား - အသီးသုပ် | salad
拌沙拉 bàn shā lā
ပန့်ရှားhလား - အသီးသုပ် | salad
拌皮蛋 bàn pí dàn
ပန့်ဖျီတန့် - ဆေးဘဲဥသုပ်
拌饭 bàn fàn
ပန့်ဖန့်f - ထမင်းသုပ်
拌西红柿 bàn xī hóng shì
ပန့်ရှီးဟုန်(င်)ရှစ်h - ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်
拌马蹄菜 bàn mǎ tí cài
ပန့်မာထီဆိုက် - မြင်းခွာရွက်သုပ်
泰式拌木瓜 tài shì bàn mù guā
ထိုက်ရှစ်h ပန့်မုကွား - ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း
若开式拌木瓜 ruò kāi shì bàn mù guā
ရော့rခိုင်းရှစ်h ပန့်မုကွား - ရခိုင် သင်္ဘောသီးသုပ်
拌芒果 bàn máng guǒ
ပန့်မန်း(င်)ကော် - သရက်သီးသုပ်
拌生鱼片 bàn shēng yú piàn
ပန့်ရှဲင်းh(င်)ယွီဖြန့် - ငါးအစိမ်းသုပ်
拌牛肠 bàn niú cháng
ပန့်နျိုးချန်h(င်) - အမဲအူသုပ်
拌猪头肉 bàn zhū tóu ròu
ပန့်ကျူးhထိုရို့r - ဝက်ခေါင်းသုပ်
拌猪杂 bàn zhū zá
ပန့်ကျူးhဇာz - ဝက်ကလီစာသုပ်
拌猪蹄 bàn zhū tí
ပန့်ကျူးhထီ - ဝက်ခြေထောက်သုပ်
拌猪耳 bàn zhū ěr
ပန့်ကျူးhအဲယ်r - ဝက်နားရွက်သုပ်
凉拌海鲜 liáng bàn hǎi xiān
လျန်(င်)ပန့် ဟိုင်ရှန်း - ပင်လယ်စာသုပ်
拌鸡丝 bàn jī sī
ပန့်ကျီးစီး - ကြက်သားသုပ်
拌鸡骨 bàn jī gǔ
ပန့်ကျီးကူ - ကြက်ရိုးသုပ်
凉拌鸡皮 liáng bàn jī pí
လျန်(င်)ပန့် ကျီးဖျီ - ကြက်အရေပြားသုပ်
拌鸡杂 bàn jī zá
ပန့်ကျီးဇာz - ကြက်ကလီစာသုပ်
★ သုပ်တာကို တရုတ်လို 凉拌 liáng bàn သို့မဟုတ် 拌 bàn လို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
စားသောကျဆိုငျတှေ ဒါမှမဟုတျ လမျးဘေးဈေးတနျးတှမှော လူကွိုကျမြားတဲ့ အသုပျအမြိုးမြိုးရဲ့ အချေါအဝျေါတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးထားပါတယျ။
ပနျ့ရှနျးခြာh - လကျဘကျသုပျ။ လကျဖကျသုပျ
ပနျ့ကနျြး(ငျ)စီး - ဂငျြးသုပျ
ပနျ့မွနျ့ထြောငျ - ခေါကျဆှဲသုပျ
ဟနျရှဈh ပနျ့မွနျ့ထြောငျ - ကိုရီးယား ခေါကျဆှဲသုပျ
ပနျ့မီးဖဲငျf - ကွာဇံသုပျ
ပနျ့စဲ့လား - အသီးသုပျ | salad
ပနျ့ရှားhလား - အသီးသုပျ | salad
ပနျ့ဖြီတနျ့ - ဆေးဘဲဥသုပျ
ပနျ့ဖနျ့f - ထမငျးသုပျ
ပနျ့ရှီးဟုနျ(ငျ)ရှဈh - ခရမျးခဉျြသီးသုပျ
ပနျ့မာထီဆိုကျ - မွငျးခှာရှကျသုပျ
ထိုကျရှဈh ပနျ့မုကှား - ယိုးဒယား သင်ျဘောသီးထောငျး
ရော့rခိုငျးရှဈh ပနျ့မုကှား - ရခိုငျ သင်ျဘောသီးသုပျ
ပနျ့မနျး(ငျ)ကျော - သရကျသီးသုပျ
ပနျ့ရှဲငျးh(ငျ)ယှီဖွနျ့ - ငါးအစိမျးသုပျ
ပနျ့နြိုးခနျြh(ငျ) - အမဲအူသုပျ
ပနျ့ကြူးhထိုရို့r - ဝကျခေါငျးသုပျ
ပနျ့ကြူးhဇာz - ဝကျကလီစာသုပျ
ပနျ့ကြူးhထီ - ဝကျခွထေောကျသုပျ
ပနျ့ကြူးhအဲယျr - ဝကျနားရှကျသုပျ
လနျြ(ငျ)ပနျ့ ဟိုငျရှနျး - ပငျလယျစာသုပျ
ပနျ့ကြီးစီး - ကွကျသားသုပျ
ပနျ့ကြီးကူ - ကွကျရိုးသုပျ
လနျြ(ငျ)ပနျ့ ကြီးဖြီ - ကွကျအရပွေားသုပျ
ပနျ့ကြီးဇာz - ကွကျကလီစာသုပျ
★ သုပျတာကို တရုတျလို 凉拌 liáng bàn သို့မဟုတျ 拌 bàn လို့ သုံးနိုငျပါတယျ။
မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့ ပွဲတော်တွေဟာ တန်ခူးလကနေ တပေါင်းလအထိ ဆယ့်နှစ်လရာသီလုံးမှာ တစ်မျိုးစီ ရှိနေကြပါတယ်။
缅历一月 miǎn lì yī yuè
မြန်လိ ယီးယွဲ့ - တန်ခူးလ
泼水节 pō shuǐ jié
ဖောရွှေhကျယ် - သင်္ကြန်ပွဲ
缅历三月 miǎn lì sān yuè
မြန်လိ စန်းယွဲ့ - နယုန်လ
书写节 shū xiě jié
ရှူးhရှယ်ကျယ် - စာပြန်ပွဲ
缅历四月 miǎn lì sì yuè
မြန်လိ စွတ်ယွဲ့ - ဝါဆိုလ
入戒节 rù jiè jié
ရုrကျဲ့ကျယ် - ဝါဆိုပွဲ
缅历五月 miǎn lì wǔ yuè
မြန်လိ ဝူယွဲ့ - ဝါခေါင်လ
抽签布施节 chōu qiān bù shī jié
ချိုးhချန်းပုရှီးhကျယ် - စာရေးတံမဲပွဲ / မဟာဒုတ်ပွဲ
缅历六月 miǎn lì liù yuè
မြန်လိ လျို့ယွဲ့ - တော်သလင်းလ
寒船节 sài chuán jié
စိုက်ချွမ်းhကျယ် - လှေပြိုင်ပွဲ
缅历七月 miǎn lì qī yuè
မြန်လိ ချီးယွဲ့ - သီတင်းကျွတ်လ
点灯节 diǎn dēng jié
တျန်တဲင်း(င်)ကျယ် - မီးထွန်းပွဲ
缅历八月 miǎn lì bā yuè
မြန်လိ ပါးယွဲ့ - တန်ဆောင်မုန်းလ
迦提那节 jiā tí nà jié
ကျားထီနာ့ကျယ် - ကထိန်ပွဲ
缅历九月 miǎn lì jiǔ yuè
မြန်လိ ကျိုယွဲ့ - နတ်တော်လ
作家节 zuò jiā jié
ဇော့zကျားကျယ် - စာဆိုတော်ပွဲ
缅历十月 miǎn lì shí yuè
မြန်လိ ရှီhယွဲ့ - ပြာသိုလ
骑士操练表演节 qí shì cāo liàn biǎo yǎn jié
ချီရှစ်hဆောင်းလျန့်ပြောင်းယန်းကျယ် - မြင်းခင်းသဘင်ပွဲ
缅历十一月 miǎn lì shí yī yuè
မြန်လိ ရှီhယီးယွဲ့ - တပို့တွဲလ
糯米糕节 nuò mǐ gāo jié
နော့မီကောင်းကျယ် - ထမနဲပွဲ
缅历十二月 miǎn lì shí èr yuè
မြန်လိ ရှီhအဲာ့rယွဲ့ - တပေါင်းလ
沙塔节 shā tǎ jié
ရှားhထာကျယ် - သဲပုံစေတီပွဲ
မွနျမာ့ ဆယျ့နှဈလရာသီ ပှဲတျောမြား။
မွနျမာ့ရိုးရာဓလေ့ ပှဲတျောတှဟော တနျခူးလကနေ တပေါငျးလအထိ ဆယျ့နှဈလရာသီလုံးမှာ တဈမြိုးစီ ရှိနကွေပါတယျ။
မွနျလိ ယီးယှဲ့ - တနျခူးလ
ဖောရှေhကယျြ - သင်ျကွနျပှဲ
မွနျလိ စနျးယှဲ့ - နယုနျလ
ရှူးhရှယျကယျြ - စာပွနျပှဲ
မွနျလိ စှတျယှဲ့ - ဝါဆိုလ
ရုrကြဲ့ကယျြ - ဝါဆိုပှဲ
မွနျလိ ဝူယှဲ့ - ဝါခေါငျလ
ခြိုးhခနျြးပုရှီးhကယျြ - စာရေးတံမဲပှဲ / မဟာဒုတျပှဲ
မွနျလိ လြို့ယှဲ့ - တျောသလငျးလ
စိုကျခြှမျးhကယျြ - လှပွေိုငျပှဲ
မွနျလိ ခြီးယှဲ့ - သီတငျးကြှတျလ
တနျြတဲငျး(ငျ)ကယျြ - မီးထှနျးပှဲ
မွနျလိ ပါးယှဲ့ - တနျဆောငျမုနျးလ
ကြားထီနာ့ကယျြ - ကထိနျပှဲ
မွနျလိ ကြိုယှဲ့ - နတျတျောလ
ဇော့zကြားကယျြ - စာဆိုတျောပှဲ
မွနျလိ ရှီhယှဲ့ - ပွာသိုလ
ခြီရှဈhဆောငျးလနျြ့ပွောငျးယနျးကယျြ - မွငျးခငျးသဘငျပှဲ
မွနျလိ ရှီhယီးယှဲ့ - တပို့တှဲလ
နော့မီကောငျးကယျြ - ထမနဲပှဲ
မွနျလိ ရှီhအဲာ့rယှဲ့ - တပေါငျးလ
ရှားhထာကယျြ - သဲပုံစတေီပှဲ
မသိုးသင်္ကန်း - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
8:57 AM C-Word , Chinese
ရွှေတိဂုံစေတီ ရင်ပြင်တော်မှာ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် မသိုးသင်္ကန်း ရက်လုပ်ကြပြီး၊ ဘုရားရှင်ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပါတယ်။
整夜 zhěng yè
ကျဲင်h(င်)ယဲ့ - တညလုံး။ ညလုံးပေါက်
ကန် - အဆောတလျင်။ အလျင်အမြန်
ကျိh - ပြုလုပ်သည်။ ထုတ်လုပ်သည်
袈裟 jiā shā
ကျားရှားh - သင်္ကန်း
zhěng yè gǎn zhì de jiā shā
ကျဲင်h(င်)ယဲ့ ကန်ကျိhတဲ့ ကျားရှားh
[ ညလုံးပေါက် အလျင်အမြန် ယက်လုပ်ရသော သင်္ကန်း ]
连夜赶制 lián yè gǎn zhì
လျန်ယဲ့ ကန်ကျိh - ညတွင်းချင်း ပြုလုပ်သည်
月盈日 yuè yíng rì
ယွဲ့ယင်(င်)ရွတ်r - လပြည့်နေ့
大金塔广场 Dà jīn tǎ guǎng chǎng
တာ့ကျင်းထာ ကွမ်း(င်)ချန်h(င်) - ရွှေတိဂုံစေတီရင်ပြင်တော်
Yǎng guāng Dà jīn tǎ guǎn lǐ wěi yuán huì
ယန်(င်)ကွမ်း(င်) တာ့ကျင်းထာ ကွမ်းလီ ဝေယွမ်ဟွေ့
မသိုးသင်ျကနျး - တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
ရှတေိဂုံစတေီ ရငျပွငျတျောမှာ တဈနှဈတဈကွိမျ မသိုးသင်ျကနျး ရကျလုပျကွပွီး၊ ဘုရားရှငျကို ဆကျကပျလှူဒါနျးကွပါတယျ။
ကြဲငျh(ငျ)ယဲ့ - တညလုံး။ ညလုံးပေါကျ
ကနျ - အဆောတလငျြ။ အလငျြအမွနျ
ကြိh - ပွုလုပျသညျ။ ထုတျလုပျသညျ
ကြားရှားh - သင်ျကနျး
ကြဲငျh(ငျ)ယဲ့ ကနျကြိhတဲ့ ကြားရှားh
[ ညလုံးပေါကျ အလငျြအမွနျ ယကျလုပျရသော သင်ျကနျး ]
လနျြယဲ့ ကနျကြိh - ညတှငျးခငျြး ပွုလုပျသညျ
ယှဲ့ယငျ(ငျ)ရှတျr - လပွညျ့နေ့
တာ့ကငျြးထာ ကှမျး(ငျ)ခနျြh(ငျ) - ရှတေိဂုံစတေီရငျပွငျတျော
ယနျ(ငျ)ကှမျး(ငျ) တာ့ကငျြးထာ ကှမျးလီ ဝယှေမျဟှေ့
ကထိန်သင်္ကန်း - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
8:18 AM C-Word , Chinese
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အလှူအတန်း ရက်ရောကြပြီး၊ ဘာသာရေးပွဲတော်တွေကိုလည်း စည်စည်ကားကား ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။
迦提那 jiā tí nà
ကျားထီနာ့ - ကထိန်
迦提那袈裟 jiā tí nà jiā shā
ကျားထီနာ့ ကျားရှားh - ကထိန်သင်္ကန်း
迦提那月 jiā tí nà yuè
ကျားထီနာ့ယွဲ့ - ကထိန်လ
ကျားထီနာ့ကျယ် - ကထိန်ပွဲတော်
迦提那节日 jiā tí nà jié rì
ကျားထီနာ့ ကျယ်ရွတ်r - ကထိန်ပွဲတော်နေ့
迦提那仪式 jiā tí nà yì shì
ကျားထီနာ့ ယိရှစ်h - ကထိန်ပွဲ
袈裟敬献节 jiā shā jìng xiàn jié
ကျားရှားh ကျင့်(င်)ရှန့်ကျယ် - သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
Jiātínàjié shì miǎndiàn fójiàotú yìnián yídù jǔbàn de zhòngyào chuántǒng jiérì.
ကျားထီနာ့ကျယ် ရှစ်h မြန်တျန့် ဖော်fကျောက်ထူ ယိနျန်ယီတု ကျွီပန့်တဲ့ ကျုံ့h(င်)ယောက် ချွမ်းhထုံ(င်)ကျယ်ရွတ်r
ကထိန်ပွဲတော်ဟာ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပကြတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပွဲတော်ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
Zài miǎnlì qīyuè shíliùrì zhì bāyuè shíwǔrì zhījiān xuǎnzé yī jírì lái jǔbàn qí jiérì de huódòng.
ဇိုက်z မြန်လိချီးယွဲ့ ရှီhလျို့ရွတ်r ကျိh ပါးယွဲ့ ရှီးhဝူရွတ်r ကျီးhကျန်း ရွှမ်ဇဲယ်z ယီးကျီရွတ်r လိုင်းကျွီပန့် ချီကျယ်ရွတ်rတဲ့ ဟော်တုံ့(င်)
သီတင်းကျွတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ကနေ တန်ဆောင်မုန်းလ ၁၅ ရက်နေ့အတွင်း နေ့ကောင်းရက်မြတ်တစ်ရက်ကို ရွေးချယ်ပြီး အဲဒီပွဲတော်ရက်ကို ကျင်းပကြပါတယ်။
ကထိနျသင်ျကနျး - တရုတျလို ဘယျလိုချေါသလဲ။
ဗုဒ်ဓဘာသာ မွနျမာလူမြိုးတှဟော အလှူအတနျး ရကျရောကွပွီး၊ ဘာသာရေးပှဲတျောတှကေိုလညျး စညျစညျကားကား ကငျြးပလရှေိ့ကွပါတယျ။
ကြားထီနာ့ - ကထိနျ
ကြားထီနာ့ ကြားရှားh - ကထိနျသင်ျကနျး
ကြားထီနာ့ယှဲ့ - ကထိနျလ
ကြားထီနာ့ကယျြ - ကထိနျပှဲတျော
ကြားထီနာ့ ကယျြရှတျr - ကထိနျပှဲတျောနေ့
ကြားထီနာ့ ယိရှဈh - ကထိနျပှဲ
ကြားရှားh ကငျြ့(ငျ)ရှနျ့ကယျြ - သင်ျကနျး ဆကျကပျလှူဒါနျးပှဲ
ကြားထီနာ့ကယျြ ရှဈh မွနျတနျြ့ ဖျောfကြောကျထူ ယိနနျြယီတု ကြှီပနျ့တဲ့ ကြုံ့h(ငျ)ယောကျ ခြှမျးhထုံ(ငျ)ကယျြရှတျr
ကထိနျပှဲတျောဟာ မွနျမာလူမြိုး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ တဈနှဈတဈကွိမျ ကငျြးပကွတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ပှဲတျောရကျ ဖွဈပါတယျ။
ဇိုကျz မွနျလိခြီးယှဲ့ ရှီhလြို့ရှတျr ကြိh ပါးယှဲ့ ရှီးhဝူရှတျr ကြီးhကနျြး ရှမျဇဲယျz ယီးကြီရှတျr လိုငျးကြှီပနျ့ ခြီကယျြရှတျrတဲ့ ဟျောတုံ့(ငျ)
သီတငျးကြှတျလ ၁၆ ရကျနကေ့နေ တနျဆောငျမုနျးလ ၁၅ ရကျနအေ့တှငျး နကေ့ောငျးရကျမွတျတဈရကျကို ရှေးခယျြပွီး အဲဒီပှဲတျောရကျကို ကငျြးပကွပါတယျ။
12:04 AM C-Word , Chinese
မြန်မာလူမျိုးတွေ စားလေ့ရှိတဲ့ မုန့်ပဲသွားရည်စာတွေကတော့ အမျိုးအမည် စုံလင်လှပါတယ်။ ဗဟုသုတရစေဖို့ စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
鱼汤米线 yú tāng mǐ xiàn
ယွီထန်း(င်)မီရှန့် - မုန့်ဟင်းခါး
簸鱼儿 bǒ yúr
ပေါ်ယွီးအဲယ်r - မုန့်လက်ဆောင်း။ မုန့်လုပ်ဆောင်း
汤圆 tāng yuán
ထန်း(င်)ယွမ် - မုန့်လုံးရေပေါ်
夫妻饼 fū qī bǐng
ဖူးfချီးပျင်(င်) - မုန့်လင်မယား
千层饼 qiān céng bǐng
ချန်းဆဲင်း(င်)ပျင်(င်) - ပလာတာ
缅式粽子 miǎn shì zòng zi
မြန်ရှစ်h ဇုံ့z(င်)ဇစ်z - ကောက်ညှင်းထုပ်
江米竹筒饭 jiāng mǐ zhú tǒng fàn
ကျန်း(င်)မီ ကျူးhထုံ(င်)ဖန့်f - ကောက်ညှင်းကျည်တောက်
炸糕 zhá gāo
ကျာhကောင်း - မုန့်လုံးကြီး
炸果子圈 zhá guǒ zi quān
ကျားhကော်ဇစ်zချွမ်း - မုန့်လက်ကောက်
粗米线 cū mǐ xiàn
ဆူးမီရှန့် - မုန့်တီ
小粒汤圆 xiǎo lì tāng yuán
ရှောင်လိ ထန်း(င်)ယွမ် - မုန့်ကြာစေ့
蒸米粉条 zhēng mǐ fěn tiáo
ကျဲင်းh(င်)မီးဖဲင်fထျောင် - မုန့်ဗိုင်းတောင့်
蜜麻花 mì má huā
မိမာဟွား - မုန့်ကြိုးလိမ်
蒸棕糖糕 zhēng zōng táng gāo
ကျဲင်းh(င်)ဇုံးz(င်)ထန်(င်)ကောင်း - မုန့်စိမ်းပေါင်း
棕糖米糕 zōng táng mǐ gāo
ဇုံးz(င်)ထန်း(င်)မီကောင်း - ဘိန်းမုန့်
棕榈糖糕 zōng lǘ táng gāo
ဇုံးz(င်)လွီးထန်(င်)ကောင်း - ထန်းသီးမုန့်
糯米饭 nuò mǐ fàn
နော့မီဖန့်f - ကောက်ညှင်းပေါင်း
ယိုးကျာhတျန်ရှင်း - အကြော်စုံ
糯米糕 nuò mǐ gāo
နော့မီကောင်း - ထမနဲ
煮豌豆 zhǔ wān dòu
ကျူhဝမ်းတို့ - ပဲပြုတ်
烧饼 shāo bǐng
ရှောင်းhပျင်(င်) - နံပြား
蜂巢饼 fēng cháo bǐng
ဖဲင်းf(င်)ချောင်းhပျင်(င်) - မုန့်စကြ်ာ
炒嫩糯米花 chǎo nèn nuò mǐ huā
ချောင်hနဲင့်နော့မီဟွား - မုန့်ဆန်း
糯米捣烂 nuò mǐ dǎo làn
နော့မီတောင်လန့် - မုန့်လေပွေ
椰糖卷米糕 yē táng juǎn mǐ gāo
ယဲထန်(င်)ကျွမ်းမီကောင်း - မုန့်သိုင်းခြုံ
蒸软米糕 zhēng ruǎn mǐ gāo
ကျဲင်းh(င်)ရွမ်းrမီကောင်း - မုန့်ဦးနှောက်
西谷米 xī gǔ mǐ
ရှီးကူးမီ - သာကူ
မွနျမာလူမြိုးတှေ စားလရှေိ့တဲ့ မုနျ့ပဲသှားရညျစာတှကေတော့ အမြိုးအမညျ စုံလငျလှပါတယျ။ ဗဟုသုတရစဖေို့ စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ယှီထနျး(ငျ)မီရှနျ့ - မုနျ့ဟငျးခါး
ပျေါယှီးအဲယျr - မုနျ့လကျဆောငျး။ မုနျ့လုပျဆောငျး
ထနျး(ငျ)ယှမျ - မုနျ့လုံးရပေျေါ
ဖူးfခြီးပငျြ(ငျ) - မုနျ့လငျမယား
ခနျြးဆဲငျး(ငျ)ပငျြ(ငျ) - ပလာတာ
မွနျရှဈh ဇုံ့z(ငျ)ဇဈz - ကောကျညှငျးထုပျ
ကနျြး(ငျ)မီ ကြူးhထုံ(ငျ)ဖနျ့f - ကောကျညှငျးကညျြတောကျ
ကြာhကောငျး - မုနျ့လုံးကွီး
ကြားhကျောဇဈzခြှမျး - မုနျ့လကျကောကျ
ဆူးမီရှနျ့ - မုနျ့တီ
ရှောငျလိ ထနျး(ငျ)ယှမျ - မုနျ့ကွာစေ့
ကြဲငျးh(ငျ)မီးဖဲငျfထြောငျ - မုနျ့ဗိုငျးတောငျ့
မိမာဟှား - မုနျ့ကွိုးလိမျ
ကြဲငျးh(ငျ)ဇုံးz(ငျ)ထနျ(ငျ)ကောငျး - မုနျ့စိမျးပေါငျး
ဇုံးz(ငျ)ထနျး(ငျ)မီကောငျး - ဘိနျးမုနျ့
ဇုံးz(ငျ)လှီးထနျ(ငျ)ကောငျး - ထနျးသီးမုနျ့
နော့မီဖနျ့f - ကောကျညှငျးပေါငျး
ယိုးကြာhတနျြရှငျး - အကွျောစုံ
နော့မီကောငျး - ထမနဲ
ကြူhဝမျးတို့ - ပဲပွုတျ
ရှောငျးhပငျြ(ငျ) - နံပွား
ဖဲငျးf(ငျ)ခြောငျးhပငျြ(ငျ) - မုနျ့စွကျာ
ခြောငျhနဲငျ့နော့မီဟှား - မုနျ့ဆနျး
နော့မီတောငျလနျ့ - မုနျ့လပှေေ
ယဲထနျ(ငျ)ကြှမျးမီကောငျး - မုနျ့သိုငျးခွုံ
ကြဲငျးh(ငျ)ရှမျးrမီကောငျး - မုနျ့ဦးနှောကျ
ရှီးကူးမီ - သာကူ
မြန်မာမုန့်မျိုးစုံ - မြန်မာ့ရိုးရာ မုန့်မျိုးစုံ - မုန့်ပဲ သွားရည်စာများ - မြန်မာ့ အစားအစာများ - မြန်မာမုန့် အမျိုးမျိုး - တရုတ်လို -
မွနျမာမုနျ့မြိုးစုံ - မွနျမာ့ရိုးရာ မုနျ့မြိုးစုံ - မုနျ့ပဲ သှားရညျစာမြား - မွနျမာ့ အစားအစာမြား - မွနျမာမုနျ့ အမြိုးမြိုး - တရုတျလို
တရုတ် - ဂျပန် ဝေါဟာရများ - ၁ - 文
10:09 PM C-Draw , Chinese
နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းမှာ မိမိစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ 文 လို့ ခေါ်ပါတယ်။
文学 - စာပေ
wén xué - ဝဲင်းရွှယ်
ぶんがく bun ga ku
文化 - ယဉ်ကျေးမှု
wén huà - ဝဲင်ဟွာ့
ぶんか - bun ka
天文学 - နက္ခတ္တဗေဒ
tiān wén xué - ထျန်းဝဲင်းရွှယ်
てんもんがく ten mon ga ku
တရုတျ - ဂပြနျ ဝေါဟာရမြား - ၁ - 文
နိုငျငံတိုငျး၊ လူမြိုးတိုငျးမှာ မိမိစာပေ၊ ယဉျကြေးမှုတှေ ကိုယျစီရှိကွပါတယျ။ စာပေ၊ ယဉျကြေးမှုကိုတော့ 文 လို့ ချေါပါတယျ။
文学 - စာပေ
wén xué - ဝဲငျးရှယျ
文化 - ယဉျကြေးမှု
wén huà - ဝဲငျဟှာ့
天文学 - နက်ခတ်တဗဒေ
tiān wén xué - ထနျြးဝဲငျးရှယျ
တရုတျစာလုံး - ဂပြနျ ခနျးဂြိ - တရုတ်စာလုံး - ဂျပန် ခန်းဂျိ - Kanji - かんじ
10:12 AM C-Word , Chinese
ဒီ post လေးထဲမှာ ဖော်ပြပေးမယ့် ဝေါဟာရတွေကတော့ 18+ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကား လေ့လာနေကြသူတွေအတွက် ဝေါဟာရပေါင်းစုံကို သိရှိနိုင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
性用品店 xìng yòng pǐn diàn
ရှင့်(င်)ယုံ့(င်)ဖျင်တျန့် - လူကြီးကစားစရာပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်
成人用品店 chéng rén yòng pǐn diàn
ချဲင်းh(င်)ရဲင်r ယုံ့(င်)ဖျင်တျန့် - လူကြီးကစားစရာပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်
自慰用品 zì wèi yòng pǐn
ဇစ်zဝေ့ယုံ့(င်)ဖျင် - လိင်စိတ်အာသာဖြေစရာ ပစ္စည်းများ
十八禁 shí bā jìn
ရှီhပါးကျင့် - 18+
充气娃娃 chōng qì wá wa
ချုံးh(င်)ချိ ဝါးဝါ - လေထိုး အရုပ်မ
人型娃娃 rén xíng wá wa
ရဲင်းrရှင်(င်) ဝါးဝါ - လေထိုး အရုပ်မ
硅胶人 guī jiāo rén
ကွေးကျောင်းရဲင်r - ဆီလီကွန် အရုပ်
飞机杯 fēi jī bēi
ဖေးfကျီးပေး - မအင်္ဂါအတု
手动的 shǒu dòng de
ရှိုhတုံ့(င်)တဲ့ - ရိုးရိုး
电动的 diàn dòng de
တျန့်တုံ့(င်)တဲ့ - အော်တို
假阳具 jiǎ yáng jù
ကျာယန်(င်)ကျွိ - ကျားအင်္ဂါအတု
假阴茎 jiǎ yīn jīng
ကျာယင်းကျင်း(င်) - ကျားအင်္ဂါအတု
电动假阴茎 diàn dòng jiǎ yīn jīng
တျန့်တုံ့(င်) ကျာယင်းကျင်း(င်) - အော်တို လှုပ်ရှားသော ကျားအင်္ဂါအတု
震动假阴茎 zhèn dòng jiǎ yīn jīng
ကျဲင့်hတုံ့(င်) ကျာယင်းကျင်း(င်) - တုန်ခါမှုစနစ်ပါသော ကျားအင်္ဂါအတု
振动棒 zhèn dòng bàng
ကျဲင့်hတုံ့(င်)ပန့်(င်) - တုန်ခါမှုစနစ်ပါသော ကျားအင်္ဂါအတု
囗红震动棒 kǒu hóng zhèn dòng bàng
ခိုဟုန်(င်) ကျဲင့်hတုံ့(င်)ပန့်(င်) - နှုတ်ခမ်းနီတောင့်ပုံ ကျားအင်္ဂါအတု
电池的 diàn chí de
တျန့်ချီhတဲ့ - ဓာတ်ခဲထည့်ရတဲ့ဟာ
充电的 chōng diàn de
ချုံးh(င်)တျန့်တဲ့ - အားသွင်းရတဲ့ဟာ
黄书 huáng shū
ဟွမ်(င်)ရှူးh - အပြာစာအုပ်
ဟွားဟွားကုံး(င်)ဇီz - Playboy
避孕药 bì yùn yào
ပိယွင့်ယောက် - သန္ဓေတားဆေး
避孕套 bì yùn tào
ပိယွင့်ထောက် - ကွန်ဒုံး
套上避孕套 tào shang bì yùn tào
ထောက်ရှန့်h(င်) ပိယွင့်ထောက် - ကွန်ဒုံး စွပ်သည်
ယန်း(င်)ဝေ - ပန်းသေခြင်း။ ပန်းညှိုးခြင်း
ဒီ post လေးထဲမှာ ဖျောပွပေးမယျ့ ဝေါဟာရတှကေတော့ 18+ တှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဘာသာစကား လလေ့ာနကွေသူတှအေတှကျ ဝေါဟာရပေါငျးစုံကို သိရှိနိုငျစဖေို့ ဖျောပွပေးခွငျးဖွဈပါတယျ။
ရှငျ့(ငျ)ယုံ့(ငျ)ဖငျြတနျြ့ - လူကွီးကစားစရာပစ်စညျး အရောငျးဆိုငျ
ခြဲငျးh(ငျ)ရဲငျr ယုံ့(ငျ)ဖငျြတနျြ့ - လူကွီးကစားစရာပစ်စညျး အရောငျးဆိုငျ
ဇဈzဝယေုံ့(ငျ)ဖငျြ - လိငျစိတျအာသာဖွစေရာ ပစ်စညျးမြား
ရှီhပါးကငျြ့ - 18+
ခြုံးh(ငျ)ခြိ ဝါးဝါ - လထေိုး အရုပျမ
ရဲငျးrရှငျ(ငျ) ဝါးဝါ - လထေိုး အရုပျမ
ကှေးကြောငျးရဲငျr - ဆီလီကှနျ အရုပျ
ဖေးfကြီးပေး - မအင်ျဂါအတု
ရှိုhတုံ့(ငျ)တဲ့ - ရိုးရိုး
တနျြ့တုံ့(ငျ)တဲ့ - အျောတို
ကြာယနျ(ငျ)ကြှိ - ကြားအင်ျဂါအတု
ကြာယငျးကငျြး(ငျ) - ကြားအင်ျဂါအတု
တနျြ့တုံ့(ငျ) ကြာယငျးကငျြး(ငျ) - အျောတို လှုပျရှားသော ကြားအင်ျဂါအတု
ကြဲငျ့hတုံ့(ငျ) ကြာယငျးကငျြး(ငျ) - တုနျခါမှုစနဈပါသော ကြားအင်ျဂါအတု
ကြဲငျ့hတုံ့(ငျ)ပနျ့(ငျ) - တုနျခါမှုစနဈပါသော ကြားအင်ျဂါအတု
ခိုဟုနျ(ငျ) ကြဲငျ့hတုံ့(ငျ)ပနျ့(ငျ) - နှုတျခမျးနီတောငျ့ပုံ ကြားအင်ျဂါအတု
တနျြ့ခြီhတဲ့ - ဓာတျခဲထညျ့ရတဲ့ဟာ
ခြုံးh(ငျ)တနျြ့တဲ့ - အားသှငျးရတဲ့ဟာ
ဟှမျ(ငျ)ရှူးh - အပွာစာအုပျ
ဟှားဟှားကုံး(ငျ)ဇီz - Playboy
ပိယှငျ့ယောကျ - သန်ဓတေားဆေး
ပိယှငျ့ထောကျ - ကှနျဒုံး
ထောကျရှနျ့h(ငျ) ပိယှငျ့ထောကျ - ကှနျဒုံး စှပျသညျ
ယနျး(ငျ)ဝေ - ပနျးသခွေငျး။ ပနျးညှိုးခွငျး
တရုတ်စကား လေ့လာနေသူများအတွက် အသုံးတည့်မယ့် စားသောက်စရာ အမျိုးမျိုးရဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အချိုပွဲ - ထျန်းတျန်
tián diǎn 甜点
ဒိန်ချဉ် - စွမ်းရူrလောက်
suān rǔ lào 酸乳酪
ချီးစ် - ကန်းလောက်
gān lào 干酪
ထောပတ် - ဟွမ်း(င်)ယို
huáng yóu 黃油
ရေခဲမုန့် - ပျင်း(င်)ချီးလဲင်
bīng qí lín 冰淇淋
ဆင်းဒ်ဝက်ခ်ျ - စန်းဝဲင်ကျိh
sān wén zhì 三文治
အာလူးပြားကြော် - ကျားhရှူhဖြန့်
zhá shǔ piàn 炸薯片
အာလူးချောင်းကြော် - ကျားhရှူhထျောင်
zhá shǔ tiáo 炸薯条
ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် - ယွိမီဟွား
yì mǐ huā 玉米花
ပီဇာ - ပေါင်းပျင်(င်)
báo bǐng 薄饼
ကျွဲရိုင်း - ဟုန်း(င်)နျို
hóng niú 红牛
ငါးသေတ္တာ - ကျင်းချန်း(င်)ယွီ
jīn qiāng yú 金枪鱼
တရုတျစကား လလေ့ာနသေူမြားအတှကျ အသုံးတညျ့မယျ့ စားသောကျစရာ အမြိုးမြိုးရဲ့ အချေါအဝျေါတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
အခြိုပှဲ - ထနျြးတနျြ
ဒိနျခဉျြ - စှမျးရူrလောကျ
ခြီးဈ - ကနျးလောကျ
ထောပတျ - ဟှမျး(ငျ)ယို
ရခေဲမုနျ့ - ပငျြး(ငျ)ခြီးလဲငျ
ဆငျးဒျဝကျချြ - စနျးဝဲငျကြိh
အာလူးပွားကွျော - ကြားhရှူhဖွနျ့
အာလူးခြောငျးကွျော - ကြားhရှူhထြောငျ
ပွောငျးဖူးပေါကျပေါကျ - ယှိမီဟှား
ပီဇာ - ပေါငျးပငျြ(ငျ)
ကြှဲရိုငျး - ဟုနျး(ငျ)နြို
ငါးသတ်ေတာ - ကငျြးခနျြး(ငျ)ယှီ
7:52 AM C-Songs , Chinese
နိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ အခု ဖော်ပြပေးမှာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
bú yuàn zuò núlì de rénmen
bǎ wǒmen de xuèròu
zhù chéng wǒmen xīn de chángchéng
ကျုhချဲင်h(င်) ဝေါ်မဲင်ရှင်းတဲ့ ချန်းh(င်)ချဲင်h(င်)
ငါတို့ရဲ့ မဟာတံတိုင်းသစ်ကြီးအဖြစ် တည်ဆောက်ကြမယ်
zhōnghuá mínzú dào liǎo zuì wēixiǎn de shíhou
ကျုံးh(င်)ဟွာမျင်းဇူz တောက်လျောင် ဇွေ့zဝေးရှန်တဲ့ရှီhဟို့
တရုတ်ပြည်သူတွေ အန္တရာယ်ကြားမှာ ရောက်ခဲ့စဉ်က
měi ge rén bèi pò zhe
fāchū zuìhòu de hǒushēng
ဖားfချူးh ဇွေ့zဟို့တဲ့ ဟိုရှဲင်းh(င်)
အဆုံးမှာ ဟိန်းဟည်းသံတွေ မြည်ဟိန်းလာပြီ
qǐ lái qǐ lái qǐ lái
ချီလိုင် ချီလိုင် ချီလိုင်
ထလော့ ထလော့ ထလော့
wǒmen wàn zhòng yì xīn
ငါတို့အားလုံး တစိတ်တည်း တဝမ်းတည်း
mào zhe dírén de pàohuǒ qiánjìn
မောက်ကျယ်h တီးရဲင်rတဲ့ဖောက်ဟော် ချန်ကျင့်
ရန်သူတွေရဲ့ အမြောက်ဗုံးဆန်တွေကို မမှုဘဲ ရှေ့ကို ချီတက်ကြမယ်
mào zhe dírén de pàohuǒ
ရန်သူတွေရဲ့ အမြောက်ဗုံးဆန်တွေကို မမှုဘဲ
前进! 前进! 前进! 进!
qián jìn qián jìn qián jìn jìn
ချန်ကျင့် ချန်ကျင့် ချန်ကျင့် ကျင့်
ရှေ့သို့ချီ ရှေ့သို့ချီ ရှေ့သို့ချီ ချီ
[ အောက်မှာ ဗီဒီယိုဖိုင် ထည့်ပေးထားပါတယ် ]
Video Credit - Original Uploader
နိုငျငံတိုငျးမှာ နိုငျငံတျောသီခငျြးတှေ ရှိကွပါတယျ။ အခု ဖျောပွပေးမှာကတော့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံတျောသီခငျြးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကြုhခြဲငျh(ငျ) ဝျေါမဲငျရှငျးတဲ့ ခနျြးh(ငျ)ခြဲငျh(ငျ)
ငါတို့ရဲ့ မဟာတံတိုငျးသဈကွီးအဖွဈ တညျဆောကျကွမယျ
ကြုံးh(ငျ)ဟှာမငျြးဇူz တောကျလြောငျ ဇှေ့zဝေးရှနျတဲ့ရှီhဟို့
တရုတျပွညျသူတှေ အန်တရာယျကွားမှာ ရောကျခဲ့စဉျက
ဖားfခြူးh ဇှေ့zဟို့တဲ့ ဟိုရှဲငျးh(ငျ)
အဆုံးမှာ ဟိနျးဟညျးသံတှေ မွညျဟိနျးလာပွီ
ခြီလိုငျ ခြီလိုငျ ခြီလိုငျ
ထလော့ ထလော့ ထလော့
ငါတို့အားလုံး တစိတျတညျး တဝမျးတညျး
မောကျကယျြh တီးရဲငျrတဲ့ဖောကျဟျော ခနျြကငျြ့
ရနျသူတှရေဲ့ အမွောကျဗုံးဆနျတှကေို မမှုဘဲ ရှကေို့ ခြီတကျကွမယျ
ရနျသူတှရေဲ့ အမွောကျဗုံးဆနျတှကေို မမှုဘဲ
ခနျြကငျြ့ ခနျြကငျြ့ ခနျြကငျြ့ ကငျြ့
ရှသေို့ခြီ ရှသေို့ခြီ ရှသေို့ခြီ ခြီ
[ အောကျမှာ ဗီဒီယိုဖိုငျ ထညျ့ပေးထားပါတယျ ]
ချစ်မွေး - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
11:46 PM C-Word , Chinese
ပါးပေါ်မှာ အဖြူရောင်အမွေး အရှည်လေးတစ်ပင်တည်း ပေါက်နေတာကို ချစ်မွေးပေါက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ မျက်နှာပွင့်တယ်၊ လူချစ်လူခင်များမယ့် အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့။
福毛 fú máo
ဖူးfမောင် - ချစ်မွေး
Wǒ de liǎnjiá nàlǐ zhǎngchū le yì gēn fúmáo.
ဝေါ်တဲ့လျန်ကျာနာ့လီ ကျန်h(င်)ချူးhလဲာ့ ယိကဲင်းဖူးfမောင်
ငါ့ပါးပေါ်မှာ ချစ်မွေးတစ်ပင် ပေါက်နေတယ်။
体毛 tǐ máo
ထီမောင် - ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ အမွေးများ
小胡子 xiǎo hú zi
ရှောင်ဟူဇစ်z - နှုတ်ခမ်းမွေး
络腮胡 luò sāi hú
လော့စိုင်းဟူ - မုတ်ဆိတ်မွေး
鬓角 bìn jiǎo
ပျင့်ကျောင် - ပါးသိုင်းမွေး
鼻毛 bǐ máo
ပီမောင် - နှာခေါင်းထဲရှိ အမွေး
胸毛 xiōng máo
ရှုံး(င်)မောင် - ရင်ဘတ်ပေါ်ရှိ အမွေး
腹毛 fù máo
ဖုfမောင် - ဝမ်းဗိုက်ပေါ်ရှိ အမွေး
眉毛 méi máo
မေးမောင် - မျက်ခုံးမွေး
睫毛 jié máo
ကျဲမောင် - မျက်တောင်မွေး
假睫毛 jiǎ jié máo
ကျာကျဲမောင် - မျက်တောင်တု
头发 tóu fa
ထိုဖာ့f - ဆံပင်
腋毛 yè máo
ယဲ့မောင် - ချိုင်းမွေး
臂毛 bì máo
ပိမောင် - လက်ဖျံမွေး
腿毛 tuǐ máo
ထွေမောင် - ခြေသလုံးနှင့်ပေါင်တွင် ပေါက်သော အမွေး
汗毛 hàn máo
ဟန့်မောင် - မွေးညင်း
汗毛孔 hàn máo kǒng
ဟန့်မောင်းခုံ(င်) - မွေးညင်းပေါက်
阴毛 yīn máo
ယင်းမောင် - အင်္ဂါဇာတ်အမွေး
肛毛 gāng máo
ကန်း(င်)မောင် - စအိုတဝိုက်တွင် ပေါက်သောအမွေး
剃毛器 tì máo qì
ထိမောင်ချိ - အမွေးရိတ်စက်
毛囊炎 máo náng yán
မောင်နန်း(င်)ယန် - မွေးကျွတ်နာ
ခဈြမှေး - တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
ပါးပျေါမှာ အဖွူရောငျအမှေး အရှညျလေးတဈပငျတညျး ပေါကျနတောကို ခဈြမှေးပေါကျတယျလို့ပွောကွတယျ။ မကျြနှာပှငျ့တယျ၊ လူခဈြလူခငျမြားမယျ့ အဓိပ်ပာယျမြိုးပေါ့။
ဖူးfမောငျ - ခဈြမှေး
ဝျေါတဲ့လနျြကြာနာ့လီ ကနျြh(ငျ)ခြူးhလဲာ့ ယိကဲငျးဖူးfမောငျ
ငါ့ပါးပျေါမှာ ခဈြမှေးတဈပငျ ပေါကျနတေယျ။
ထီမောငျ - ခန်ဓာကိုယျပျေါရှိ အမှေးမြား
ရှောငျဟူဇဈz - နှုတျခမျးမှေး
လော့စိုငျးဟူ - မုတျဆိတျမှေး
ပငျြ့ကြောငျ - ပါးသိုငျးမှေး
ပီမောငျ - နှာခေါငျးထဲရှိ အမှေး
ရှုံး(ငျ)မောငျ - ရငျဘတျပျေါရှိ အမှေး
ဖုfမောငျ - ဝမျးဗိုကျပျေါရှိ အမှေး
မေးမောငျ - မကျြခုံးမှေး
ကြဲမောငျ - မကျြတောငျမှေး
ကြာကြဲမောငျ - မကျြတောငျတု
ထိုဖာ့f - ဆံပငျ
ယဲ့မောငျ - ခြိုငျးမှေး
ပိမောငျ - လကျဖြံမှေး
ထှမေောငျ - ခွသေလုံးနှငျ့ပေါငျတှငျ ပေါကျသော အမှေး
ဟနျ့မောငျ - မှေးညငျး
ဟနျ့မောငျးခုံ(ငျ) - မှေးညငျးပေါကျ
ယငျးမောငျ - အင်ျဂါဇာတျအမှေး
ကနျး(ငျ)မောငျ - စအိုတဝိုကျတှငျ ပေါကျသောအမှေး
ထိမောငျခြိ - အမှေးရိတျစကျ
မောငျနနျး(ငျ)ယနျ - မှေးကြှတျနာ
毛 - máo - mao2 - mao - ㄇㄠ - အမွေး - အမွေးအမှင် - အမွေးအမျှင် - အမှေး - အမှေးအမှငျ - အမှေးအမြှငျ
ဘောင်ဘောင်သေနတ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
9:43 AM C-Word , Chinese
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တချို့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ကလေးတွေ ဆော့ကြတဲ့ ကစားစရာတစ်မျိုးကတော့ ဘောင်ဘောင်လို့ခေါ်တဲ့ ဝါးဆစ်သေနတ်လေးပေါ့။
竹管枪 zhú guǎn qiāng
ကျူးhကွမ်ချန်း(င်) - ဘောင်ဘောင်
竹气枪 zhú qì qiāng
ကျူhချိချန်း(င်) - ဘောင်ဘောင်
ဘောင်ဘောင်ဆိုတာက ဝါးလုံးအဆစ်နှစ်ခုကြားကို ဖြတ်ပြီး၊ အဲဒီဝါးလုံးခေါင်းလေးထဲကို မြရာသီး ထည့်ပြီးတော့ ထိုးတံလေးနဲ့ ထိုးထည့်ပြီး သေနတ်ပစ်သလို ဆော့ကစားရတာပါ။ မြရာသီးကို ဘောင်ဘောင်သီး၊ ဗောင်ဗောင်သီး၊ ပေါင်ပေါင်သီး စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Microcos paniculata လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြရာသီး မပေါ်သေးတဲ့အခါမျိုးမှာ စက္ကူစတွေကို ဝါးပြီးတော့ အလုံးလေးတွေလုံးပြီး ထည့်ပစ်လို့ရပါတယ်။
竹竿 zhú gān
ကျူhကန်း - ဝါးလုံး
竹节 zhú jié
ကျူးhကျယ် - ဝါးဆစ်
撞针 zhuàng zhēn
ကျွမ့်h(င်)ကျဲင်းh - ကျည်ရိုက်တံ
推竿 tuī gān
ထွေးကန်း - ထိုးတံ
手柄 shǒu bǐng
ရှိုးhပျင်(င်) - လက်ကိုင်ရိုး
竹筒 zhú tǒng
ကျူးhထုံ(င်) - ဝါးကျည်တောက်
弹药 dàn yào
တန့်ယောက် - ခဲယမ်းမီးကျောက်။ ကျည်ဆန်
纸弹 zhǐ dàn
ကျီhတန့် - စက္ကူကျည်ဆန်
竹筒枪子弹 zhú tǒng qiāng zǐ dàn
ကျူးhထုံ(င်)ချန်း(င်)ဇီzတန့် - ဝါးသေနတ်ကျည်ဆန်
ဖား - သေနတ်မြည်သံ
朴树果 pō shù guǒ
ဖောရှုhကော် - ဘောင်ဘောင်သီး။ မြရာသီး
羊奶奶果 yáng nǎi nai guǒ
ယန်း(င်)နိုင်နိုက်ကော် - ဘောင်ဘောင်သီး။ မြရာသီး
Wǒmen xiǎoshíhou yòng zhúguǎnqiāng jīngcháng kāizhǎn zhàndòu yóuxì.
ဝေါ်မဲင်းရှောင်ရှီhဟို့ ယုံ့(င်)ကျူးhကွမ်ချန်း(င်) ကျင်း(င်)ချန်h(င်)ခိုင်းကျန်h ကျန့်hတို့ယိုရှိ
ငါတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘောင်ဘောင်တွေနဲ့ စစ်တိုက်တမ်း ကစားကြတယ်။
မြရာပင်က ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ အရွက်၊ အသီးတွေကို ဆေးဖော်စပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ မြရာသီးအမှည့်တွေကို စားလို့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ တချို့ဒေသတွေမှာ မြရာပင်တွေ အလေ့ကျ ပေါက်ရောက်ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ Yunnan, Guangdong နဲ့ Guangxi ပြည်နယ်တွေမှာ ပေါက်ရောက်ပါတယ်။ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးတွေမှာ မြရာသီးနဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေဟာ အစာမကြေခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့ အအေးမိတဲ့အခါမှာ သောက်သုံးပါတယ်။
မြရာပင်ကို တရုတ်လို အခေါ်အဝေါ်များစွာ ရှိပါတယ်။
破布树 pò bù shù
ဖော့ပုရှုh - မြရာပင်
破布 pò bù
ဖော့ပု - မြရာပင်
布渣 bù zhā
ပုကျားh - မြရာပင်
包蔽木 bāo bì mù
ပေါင်းပိမု - မြရာပင်
泡卜布 pào bǔ bù
ဖောက်ပူပု - မြရာပင်
解宝树 jiě bǎo shù
ကျဲပေါင်ရှုh - မြရာပင်
布包木 bù bāo mù
ပုပေါင်းမု - မြရာပင်
狗具木 gǒu jù mù
ကိုကျွိမု - မြရာပင်
破布叶 pò bù yè
ဖော့ပုယဲ့ - မြရာရွက်
布渣叶 bù zhā yè
ပုကျားhယဲ့ - မြရာရွက်
解宝叶 jiě bǎo yè
ကျဲပေါင်ယဲ့ - မြရာရွက်
ဘောငျဘောငျသနေတျ - တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တခြို့ကြေးလကျဒသေတှမှော ကလေးတှေ ဆော့ကွတဲ့ ကစားစရာတဈမြိုးကတော့ ဘောငျဘောငျလို့ချေါတဲ့ ဝါးဆဈသနေတျလေးပေါ့။
ကြူးhကှမျခနျြး(ငျ) - ဘောငျဘောငျ
ကြူhခြိခနျြး(ငျ) - ဘောငျဘောငျ
ဘောငျဘောငျဆိုတာက ဝါးလုံးအဆဈနှဈခုကွားကို ဖွတျပွီး၊ အဲဒီဝါးလုံးခေါငျးလေးထဲကို မွရာသီး ထညျ့ပွီးတော့ ထိုးတံလေးနဲ့ ထိုးထညျ့ပွီး သနေတျပဈသလို ဆော့ကစားရတာပါ။ မွရာသီးကို ဘောငျဘောငျသီး၊ ဗောငျဗောငျသီး၊ ပေါငျပေါငျသီး စသညျဖွငျ့ ချေါဝျေါပွီး အင်ျဂလိပျလိုတော့ Microcos paniculata လို့ ချေါပါတယျ။ မွရာသီး မပျေါသေးတဲ့အခါမြိုးမှာ စက်ကူစတှကေို ဝါးပွီးတော့ အလုံးလေးတှလေုံးပွီး ထညျ့ပဈလို့ရပါတယျ။
ကြူhကနျး - ဝါးလုံး
ကြူးhကယျြ - ဝါးဆဈ
ကြှမျ့h(ငျ)ကြဲငျးh - ကညျြရိုကျတံ
ထှေးကနျး - ထိုးတံ
ရှိုးhပငျြ(ငျ) - လကျကိုငျရိုး
ကြူးhထုံ(ငျ) - ဝါးကညျြတောကျ
တနျ့ယောကျ - ခဲယမျးမီးကြောကျ။ ကညျြဆနျ
ကြီhတနျ့ - စက်ကူကညျြဆနျ
ကြူးhထုံ(ငျ)ခနျြး(ငျ)ဇီzတနျ့ - ဝါးသနေတျကညျြဆနျ
ဖား - သနေတျမွညျသံ
ဖောရှုhကျော - ဘောငျဘောငျသီး။ မွရာသီး
ယနျး(ငျ)နိုငျနိုကျကျော - ဘောငျဘောငျသီး။ မွရာသီး
ဝျေါမဲငျးရှောငျရှီhဟို့ ယုံ့(ငျ)ကြူးhကှမျခနျြး(ငျ) ကငျြး(ငျ)ခနျြh(ငျ)ခိုငျးကနျြh ကနျြ့hတို့ယိုရှိ
ငါတို့ ငယျငယျတုနျးက ဘောငျဘောငျတှနေဲ့ စဈတိုကျတမျး ကစားကွတယျ။
မွရာပငျက ဆေးဖကျဝငျတဲ့ အပငျတဈမြိုးဖွဈပွီး၊ အရှကျ၊ အသီးတှကေို ဆေးဖျောစပျရာမှာ သုံးပါတယျ။ မွရာသီးအမှညျ့တှကေို စားလို့ရပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ တခြို့ဒသေတှမှော မွရာပငျတှေ အလကြေ့ ပေါကျရောကျပွီး၊ တရုတျနိုငျငံမှာတော့ Yunnan, Guangdong နဲ့ Guangxi ပွညျနယျတှမှော ပေါကျရောကျပါတယျ။ တရုတျတိုငျးရငျးဆေးတှမှော မွရာသီးနဲ့ ဖျောစပျထားတဲ့ ဆေးဝါးတှဟော အစာမကွခွေငျး၊ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောခွငျးနဲ့ အအေးမိတဲ့အခါမှာ သောကျသုံးပါတယျ။
မွရာပငျကို တရုတျလို အချေါအဝျေါမြားစှာ ရှိပါတယျ။
ဖော့ပုရှုh - မွရာပငျ
ဖော့ပု - မွရာပငျ
ပုကြားh - မွရာပငျ
ပေါငျးပိမု - မွရာပငျ
ဖောကျပူပု - မွရာပငျ
ကြဲပေါငျရှုh - မွရာပငျ
ပုပေါငျးမု - မွရာပငျ
ကိုကြှိမု - မွရာပငျ
ဖော့ပုယဲ့ - မွရာရှကျ
ပုကြားhယဲ့ - မွရာရှကျ
ကြဲပေါငျယဲ့ - မွရာရှကျ
ပလုတ်တုတ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
7:52 AM C-Word , Chinese
ပလုတ်တုတ်ဆိုတာ ကလေးကစားစရာပစ္စည်းတစ်မျိုးပေါ့။ သင် ငယ်စဉ်က ပလုတ်တုတ်နဲ့ ကစားခဲ့ဖူးပါသလား။
拨浪鼓 bō làng gǔ
ပေါလန့်(င်)ကူ - ပလုတ်တုတ်
不倒翁 bù dǎo wēng
ပုတောင်ဝဲင်း(င်) - ပစ်တိုင်းထောင်
花铃棒 huā líng bàng
ဟွားလင်(င်)ပန့်(င်) - ဂျောက်ဂျက်
陀螺 tuó luó
ထောလော် - ဂျင်
玩具枪 wán jù qiāng
ဝမ်ကျွိချန်း(င်) - ကစားစရာသေနတ်
发条玩具 fā tiáo wán jù
ဖားfထျောင်ဝမ်ကျွိ - သံပတ်ရုပ်
Jīhū suǒyǒu de nánhái dōu xǐhuan wán wánjùqiāng.
ကျီးဟူးစောယိုတဲ့ နန်းဟိုင်တိုးရှီဟွမ်းဝမ် ဝမ်ကျွိချန်း(င်)
ယောင်္ကျားလေးအားလုံးနီးပါး သေနတ်နဲ့ ဆော့ရတာကို သဘောကျကြတယ်။
ပလုတျတုတျ - တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
ပလုတျတုတျဆိုတာ ကလေးကစားစရာပစ်စညျးတဈမြိုးပေါ့။ သငျ ငယျစဉျက ပလုတျတုတျနဲ့ ကစားခဲ့ဖူးပါသလား။
ပေါလနျ့(ငျ)ကူ - ပလုတျတုတျ
ပုတောငျဝဲငျး(ငျ) - ပဈတိုငျးထောငျ
ဟှားလငျ(ငျ)ပနျ့(ငျ) - ဂြောကျဂကျြ
ထောလျော - ဂငျြ
ဝမျကြှိခနျြး(ငျ) - ကစားစရာသနေတျ
ဖားfထြောငျဝမျကြှိ - သံပတျရုပျ
ကြီးဟူးစောယိုတဲ့ နနျးဟိုငျတိုးရှီဟှမျးဝမျ ဝမျကြှိခနျြး(ငျ)
ယောကငြ်္ားလေးအားလုံးနီးပါး သနေတျနဲ့ ဆော့ရတာကို သဘောကကြွတယျ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကားအမျိုးအစား အမည်များ။
4:30 AM C-Word , Chinese
စက်မှုနိုင်ငံတွေမှာ ကားကုမ္ပဏီ အမျိုးမျိုးက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကားအမျိုးအစားအမည်တွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
兰德酷路泽 lán dé kù lù zé
လန်းတဲယ်ခုလုဇဲယ်z - Land Cruiser
普拉多 pǔ lā duō
ဖူလားတော - Prado
阿尔法 ā ěr fǎ
အားအဲယ်းrဖာf - ALPHARD
沃尔沃 wò ěr wò
ဝေါ့အယ်rဝေါ့ - Volvo
宝马 bǎo mǎ
ပေါင်းမာ - BMW
劳斯莱斯 láo sī lái sī
လောင်စီးလိုင်စီး - Rolls-Royce
雪佛兰 xuě fú lán
ရွှယ်ဖူးfလန် - Chevrolet
梅赛德斯 méi sài dé sī
မေစိုက်တဲယ်စီး - Mercedes
奔驰 bēn chí
ပဲင်းချီh - Mercedes Benz
雷克萨斯 léi kè sà sī
လေခဲါ့စာ့စီး - Lexus
凌志 líng zhì
လင်(င်)ကျိh - Lexus
路虎 lù hǔ
လုဟူ - Land Rover
法拉利 fǎ lā lì
ဖာfလားလိ - Ferrari
菲亚特 fēi yà tè
ဖေးfယာ့ထဲ့ - Fiat
奥迪 ào dí
အောက်တီ - Audi
大宇 dà yǔ
တာ့ယွီ - Daewoo
现代 xiàn dài
ရှန့်တိုက် - Hyundai
尼桑 ní sāng
နီစန်း(င်) - Nissan
日产 rì chǎn
ရွတ်rချန်h - Nissan
三菱 sān líng
စန်းလင်(င်) - Mitsubishi
丰田 fēng tián
ဖဲင်းf(င်)ထျန် - Toyota
黄冠 huáng guān
ဟွမ်(င်)ကွမ်း - Crown
铃木 líng mù
လင်(င်)မု - Suzuki
五十铃 wǔ shí líng
ဝူရှီးhလင်(င်) - Isuzu
林肯 lín kěn
လင်းခဲင် - Lincoln
福特 fú tè
ဖူfထဲ့ - Ford
起亚 qǐ yà
ချီယာ့ - KIA
大众 dà zhòng
တာ့ကျုံ့h(င်) - Volkswagen
桑塔纳 sāng tǎ nà
စန်း(င်)ထာနာ့ - Santana
အောက်စီးထင်း(င်) - Austin
切诺基 qiè nuò jī
ချဲ့နော့ကျီး - Cherokee
克莱斯勒 kè lái sī lēi
ခဲါ့လိုင်စီးလေး - Crysler
讴歌 ōu gē
အိုးကဲယ်း - Acura
凯迪拉克 kǎi dí lā kè
ခိုင်တီလားခဲါ့ - Cadillac
宾利 bīn lì
ပျင်းလိ - Bentley
英菲尼迪 yīng fēi ní dí
ယင်း(င်)ဖေးfနီးတီ - Infiniti
依维科 yī wéi kē
ယီးဝေခဲယ်း - Iveco
道奇 dào qí
တောက်ချီ - Dodge
兰博基尼 lán bó jī ní
လန်းပေါ်ကျီးနီ - Lamborghini
လျန်ဟွား - Lotus
欧宝 ōu bǎo
အိုးပေါင် - Opel
英帕拉 yīng pà lā
ယင်း(င်)ဖာ့လား - Impala
马自达 mǎ zì dá
မာဇစ်zတာ - Mazda
纳智捷 nà zhì jié
နာ့ကျိhကျယ် - Uxgei
迈巴赫 mài bā hè
မိုက်ပါးဟဲယ့် - Maybach
荣威 róng wēi
ရုံr(င်)ဝေး - Roewe
雷诺 léi nuò
လေနော့ - Renault
野马 yě mǎ
ယဲမာ - Mustang
斯巴鲁 sī bā lǔ
စီးပါးလူ - Subaru
塞恩 sài ēn
စိုက်အဲင်း - Scion
雪铁龙 xuě tiě lóng
ရွှဲထျယ်လုံ(င်) - Citroen
别克 bié kè
ပြယ်ခဲါ့ - Buick
斯柯达 sī kē dá
စီးခဲယ်းတာ - Skoda
标致 biāo zhì
ပျောင်းကျိh - Peugeot
帕加尼 pà jiā ní
ဖာ့ကျားနီ - Pagani
捷豹 jié bào
ကျယ်ပေါက် - Jaguar
名爵 míng jué
မျင်း(င်)ကျွယ် - MG / Morris Garages
玛莎拉蒂 mǎ shā lā dì
မာရှားhလားတိ - Maserati
阿斯顿马丁 ā sī dùn mǎ dīng
အားစီးတွင့်မာတင်း(င်) - Aston Martin
ကမ်ဘာပျေါရှိ ကားအမြိုးအစား အမညျမြား။
စကျမှုနိုငျငံတှမှော ကားကုမ်ပဏီ အမြိုးမြိုးက ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ ကားအမြိုးအစားအမညျတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
လနျးတဲယျခုလုဇဲယျz - Land Cruiser
ဖူလားတော - Prado
အားအဲယျးrဖာf - ALPHARD
ဝေါ့အယျrဝေါ့ - Volvo
ပေါငျးမာ - BMW
လောငျစီးလိုငျစီး - Rolls-Royce
ရှယျဖူးfလနျ - Chevrolet
မစေိုကျတဲယျစီး - Mercedes
ပဲငျးခြီh - Mercedes Benz
လခေဲါ့စာ့စီး - Lexus
လငျ(ငျ)ကြိh - Lexus
ဖေးfယာ့ထဲ့ - Fiat
အောကျတီ - Audi
တာ့ယှီ - Daewoo
ရှနျ့တိုကျ - Hyundai
နီစနျး(ငျ) - Nissan
ရှတျrခနျြh - Nissan
စနျးလငျ(ငျ) - Mitsubishi
ဖဲငျးf(ငျ)ထနျြ - Toyota
ဟှမျ(ငျ)ကှမျး - Crown
လငျ(ငျ)မု - Suzuki
ဝူရှီးhလငျ(ငျ) - Isuzu
လငျးခဲငျ - Lincoln
ခြီယာ့ - KIA
တာ့ကြုံ့h(ငျ) - Volkswagen
စနျး(ငျ)ထာနာ့ - Santana
အောကျစီးထငျး(ငျ) - Austin
ခြဲ့နော့ကြီး - Cherokee
ခဲါ့လိုငျစီးလေး - Crysler
အိုးကဲယျး - Acura
ခိုငျတီလားခဲါ့ - Cadillac
ပငျြးလိ - Bentley
ယငျး(ငျ)ဖေးfနီးတီ - Infiniti
ယီးဝခေဲယျး - Iveco
တောကျခြီ - Dodge
လနျးပျေါကြီးနီ - Lamborghini
လနျြဟှား - Lotus
အိုးပေါငျ - Opel
ယငျး(ငျ)ဖာ့လား - Impala
မာဇဈzတာ - Mazda
နာ့ကြိhကယျြ - Uxgei
မိုကျပါးဟဲယျ့ - Maybach
ရုံr(ငျ)ဝေး - Roewe
လနေော့ - Renault
စိုကျအဲငျး - Scion
ရှဲထယျြလုံ(ငျ) - Citroen
ပွယျခဲါ့ - Buick
စီးခဲယျးတာ - Skoda
ပြောငျးကြိh - Peugeot
ဖာ့ကြားနီ - Pagani
ကယျြပေါကျ - Jaguar
မငျြး(ငျ)ကြှယျ - MG / Morris Garages
မာရှားhလားတိ - Maserati
အားစီးတှငျ့မာတငျး(ငျ) - Aston Martin
မော်တော်ယာဉ် - မော်တော်ကား - qi che - qi4 che1 - qìchē - 汽车 ကား တရုတ်လို - မျောတျောယာဉျ - မျောတျောကား - ကား တရုတျလို
ငါးပါးသီလ - တရုတ်လို ရွတ်ဖတ်ကြမယ်။
ငါးပါးသီလဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ စောင့်ထိန်းကြတဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတရားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ပါဠိလို ရွတ်ဖတ်ကြည့်ကြမယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပါဠိအသံထွက်တွေကို မြန်မာလို မတတ်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ အလွယ်တကူ ရွတ်ဖတ်နိုင်အောင် တရုတ်စာလုံးတွေနဲ့ အသံဖလှယ်ပေးထားပါတယ်။
ငါးပါးသီလ ( ပဉ္စသီလ )
五戒 ( 班卡西那 )
Wǔ jiè ( Bān kǎ xī nà )
The Five Precepts ( Panca Sila )
၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
巴纳地巴达 为了麻尼 昔卡巴党 沙马地亚咪。
Bānàdìbādá wèilemání xīkǎbādǎng shāmǎdìyàmī.
၂။ အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
阿地纳达纳 为了麻尼 昔卡巴党 沙马地亚咪。
Ãdìnàdánà wèilemání xīkǎbādǎng shāmǎdìyàmī.
၃။ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
卡米叔眉喳假拉 为了麻尼 昔卡巴党 沙马地亚咪。
Kǎmǐshūméizhājiǎlā wèilemání xīkǎbādǎng shāmǎdìyàmī.
၄။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
目杀娃打 为了麻尼 昔卡巴党 沙马地亚咪。
Mùshāwádǎ wèilemání xīkǎbādǎng shāmǎdìyàmī.
၅။ သုရာမေရယ မဇ္ဇပ္ပမာဒဌာနံ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
树拉米了亚 麻假把马打他那 为了麻尼 昔卡巴党 沙马地亚咪。
Shùlāmǐleyà májiǎbǎmǎdǎtānà wèilemání xīkǎbādǎng shāmǎdìyàmī.
Zì xíng shòu chí zhe niàn zhì cǐ wéi zhǐ.
★ ငါးပါးသီလအနက် မြန်မာပြန်
၁။ သူ့အသက်လည်း မသတ်ဘဲ အမြဲ ရှောင်ကျဉ်မည်။
Wǒ yuàn shòu chí bù shā shēng jiè.
I undertake to observe the precept to abstain from destorying living beings.
၂။ သူ့ဥစ္စာလည်း မခိုးဘဲ အမြဲ ရှောင်ကျဉ်မည်။
Wǒ yuàn shòu chí bù tōu qiè jiè.
၃။ ကာမဂုဏ်လည်း မမှားဘဲ အမြဲ ရှောင်ကျဉ်မည်။
Wǒ yuàn shòu chí bù xié yín jiè.
၄။ လိမ်ညာ၍လည်း မပြောဘဲ အမြဲ ရှောင်ကျဉ်မည်။
Wǒ yuàn shòu chí bù wàng yǔ jiè.
၅။ သေရည်အရက်၊ မူးယစ်ဆေးလည်း မသောက်သုံးဘဲ အမြဲ ရှောင်ကျဉ်မည်။
我愿受持不饮酒戒 ( 包括吸毒 )。
Wǒ yuàn shòu chí bù yǐn jiǔ jiè ( bāo kuò xī dú ).
ဝေါ်ယွမ့်ရှို့hချီh ပုယင်းကျိုကျဲ့ ( ပေါင်းခေါ့ ရှီးတူ )
ငါးပါးသီလ - တရုတျလို ရှတျဖတျကွမယျ။
ငါးပါးသီလဆိုတာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ စောငျ့ထိနျးကွတဲ့ ကိုယျကငျြ့သိက်ခာတရားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ပထမဆုံး ပါဠိလို ရှတျဖတျကွညျ့ကွမယျ။ အောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ ပါဠိအသံထှကျတှကေို မွနျမာလို မတတျတဲ့ တရုတျလူမြိုးတှေ အလှယျတကူ ရှတျဖတျနိုငျအောငျ တရုတျစာလုံးတှနေဲ့ အသံဖလှယျပေးထားပါတယျ။
ငါးပါးသီလ ( ပဉ်စသီလ )
၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝရေမဏိ သိက်ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
၂။ အဒိန်နာဒါနာ ဝရေမဏိ သိက်ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
၃။ ကာမသေု မိစ်ဆာစာရာ ဝရေမဏိ သိက်ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
၄။ မုသာဝါဒါ ဝရေမဏိ သိက်ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
၅။ သုရာမရေယ မဇ်ဇပ်ပမာဒဌာနံ ဝရေမဏိ သိက်ခာပဒံ သမာဓိယာမိ။
★ ငါးပါးသီလအနကျ မွနျမာပွနျ
၁။ သူ့အသကျလညျး မသတျဘဲ အမွဲ ရှောငျကဉျြမညျ။
၂။ သူ့ဥစ်စာလညျး မခိုးဘဲ အမွဲ ရှောငျကဉျြမညျ။
၃။ ကာမဂုဏျလညျး မမှားဘဲ အမွဲ ရှောငျကဉျြမညျ။
၄။ လိမျညာ၍လညျး မပွောဘဲ အမွဲ ရှောငျကဉျြမညျ။
၅။ သရေညျအရကျ၊ မူးယဈဆေးလညျး မသောကျသုံးဘဲ အမွဲ ရှောငျကဉျြမညျ။
ဝျေါယှမျ့ရှို့hခြီh ပုယငျးကြိုကြဲ့ ( ပေါငျးခေါ့ ရှီးတူ )
9:56 AM C-Word , Chinese
ငယ်စဉ်အခါက ကလေးတို့သဘာဝ အိုးပုတ် ချိုးရုပ်လေးတွေနဲ့ ဆော့ကစားခဲ့ကြတာ အမှတ်ရကြအုံးမယ် ထင်ပါတယ်။
玩具 wán jù
ဝမ်ကျွိ - ကလေး ကစားစရာ
玩具店 wán jù diàn
ဝမ်ကျွိတျန့် - ကစားစရာပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်
小陶锅 xiǎo táo guō
ရှောင်ထောင်ကော - ကလေးကစားစရာ အိုးပုတ်
山鸠像 shān jiū xiàng
ရှန်းhကျိုးရှန့်(င်) - ကလေးကစားစရာ ချိုးရုပ်
洋娃娃 yáng wá wa
ယန်(င်)ဝါးဝါ - ယမင်းရုပ်
布娃娃 bù wá wa
ပုဝါးဝါ - အဝတ်ရုပ်
芭比娃娃 bā bǐ wá wa
ပါးပီဝါးဝါ - ဘာဘီရုပ်
木 偶 mù ǒu
မုအို - ရုပ်သေးရုပ်
胖娃娃 pàng wá wa
ဖန့်(င်)ဝါးဝါ - ဖိုးဝရုပ်
泥娃娃 ní wá wa
နီးဝါးဝါ - ရွှံ့ရုပ်
Bú yào luàn dòng wǒ de wánjù.
ပူယောက် လွမ့်တုံ့(င်) ဝေါ်တဲ့ဝမ်ကျွိ
ငယျစဉျအခါက ကလေးတို့သဘာဝ အိုးပုတျ ခြိုးရုပျလေးတှနေဲ့ ဆော့ကစားခဲ့ကွတာ အမှတျရကွအုံးမယျ ထငျပါတယျ။
ဝမျကြှိ - ကလေး ကစားစရာ
ဝမျကြှိတနျြ့ - ကစားစရာပစ်စညျး အရောငျးဆိုငျ
ရှောငျထောငျကော - ကလေးကစားစရာ အိုးပုတျ
ရှနျးhကြိုးရှနျ့(ငျ) - ကလေးကစားစရာ ခြိုးရုပျ
ယနျ(ငျ)ဝါးဝါ - ယမငျးရုပျ
ပုဝါးဝါ - အဝတျရုပျ
ပါးပီဝါးဝါ - ဘာဘီရုပျ
မုအို - ရုပျသေးရုပျ
ဖနျ့(ငျ)ဝါးဝါ - ဖိုးဝရုပျ
နီးဝါးဝါ - ရှံ့ရုပျ
ပူယောကျ လှမျ့တုံ့(ငျ) ဝျေါတဲ့ဝမျကြှိ
▼ April ( 166 )
ချစ်သူများနေ့ - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
မြန်မာငွေ - ကျပ်၊ ပြား တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
ဖြည့်စွက်ပုဒ် 一下 yí xià ၏ အသုံးပြုပုံ။
အနည်းကိန်းနှင့် အများကိန်းပြ ပုံစံများ။
Modal Particle 啊 ၏ အသုံးပြုပုံများ။
ဝိဘတ် 给 gěi ၏ အသုံးပြုပုံ။
ဝိဘတ် 被 bèi ၏ အသုံးပြုပုံ။
的 de / 得 de / 地 de ဘယ်လို ခွဲသုံးမလဲ။
得 ၏ အသံထွက်များ။
သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရများ။
ဝိဘတ် 把 bǎ ၏ အသုံးပြုပုံ။
没 méi အသုံးပြုပုံ အပိုင်း - ၅
没 méi အသုံးပြုပုံ အပိုင်း - ၄
没 méi အသုံးပြုပုံ အပိုင်း - ၃
没 méi အသုံးပြုပုံ အပိုင်း - ၂
没 méi အသုံးပြုပုံ အပိုင်း - ၁
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၅၁
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၅၀
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၉
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၈
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၇
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၆
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၅
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၄
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၃
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၂
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၁
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄၀
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၉
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၈
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၇
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၆
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၅
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၄
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၃
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၂
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၁
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃၀
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၉
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၈
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၇
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၆
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၅
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၄
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၃
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၂
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၁
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂၀
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၉
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၈
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၇
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၆
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၅
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၄
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၃
မြန်မာအမည် တရုတ်အသံထွက် ဖလှယ်ပုံ။
屌毛 ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၂
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၁
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁၀
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၉
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၈
々 ရဲ့ အသံထွက်နဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ။
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၇
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၆
好个屁 ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၅
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၄
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၃
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၂
တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ - ၁
သင့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လို ခံစားနေရသလဲ။
စိတ်ခံစားချက်ကို ဖော်ပြသော ဝေါဟာရများ။
အသား၊ ငါး အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ပေါ်မှ ခလုတ်များ။
သင့်နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုအစိုးရ အုပ်ချုပ်သလဲ။